Gịnị kpatara Fr. Michel Rodrigue? A Virtual reatlaghachi - Countdown na Alaeze
Banyere onye isi nchụ aja, Exorcist, onye nchoputa na onye isi n ’ụlọ ọrụ nchekwa nke Saint Benedict Joseph Labre (hibere na 2012)
Na Eprel 23, 2020, Fr. Michel Rodrigue gwara anyị na bishọp ya bụ Rev. Gilles Lemay anaghị akwado Fr. Ozi Michel; ọ gwara Fr. Michel, na ederede, na ọ kwadoghị echiche nke "ịdọ aka na ntị, ntaramahụhụ, Agha thirdwa nke atọ, Oge Udo, owuwu ọ bụla nke ebe mgbaba, et cetera." Fr. Michel, n’achọ irube isi, rịọ Countdown ka Alaeze ahụ wepu aha ọ bụla webusaiti nke bishọp anyị na-akwado ozi ya, nke anyị mere.
Biko mara na, ọ bụ ezie na anyị maara ugbu a na Bishop Lemay "anaghị akwado" Fr. Ozi Michel, ọ ka bụ eziokwu na ozi ndị ahụ bụ ezie ọ bụghị ikpe. Enwebeghị ajụjụ nyocha ọ bụla na Fr. Mpaghara / ọhụụ nke Michel wdg site na diocese ya mere, n'oge a, anyị na-echekwa ha ebe a na Ngụkọta nke Alaeze ahụ n'ihi na ọnọdụ anyị maka ha agbanwebeghị; anyi n’aga n’iru na achota ha odi nkpa ka ndi Ogu Kraist meghota ha ebe obu na ha bu akuku “nkwekorita amuma” nke ndi huru ya n’uwa nile. Anyị ga, dịka mgbe niile, anyị ga-edo onwe anyị kpamkpam na nkwupụta ọ bụla iwu theka nwere ike ịkọ maka ọdịnihu. Ọzọkwa, ọ nweghị nkwupụta gara aga edepụtara na weebụsaịtị a chọrọ iji gosipụta Fr. Ozi nile nke Michel nwetara nkwado nke Bishop ya nke ọma; naanị Fr na Michel n’onwe ya, dika onye isi ezi onodu, nwere nkwado nke Bishop ya. Fr. Nkwupụta Michel kwuru na ọ “na-agwa Bishọp ihe niile” apụtaghị na bishọp kwadoro nke Fr. Ozi nke Michel.
A na-akpọ gị oku ka gị na Fr. Michel Rodrigue
Chịkọtara ihe ndị a
nke Christine Watkins
Chineke nna kwuru na enyere Fr. Michel Rodrigue nghọta zuru oke banyere ihe ndị ga-eme na etu aga-esi kwadebe. (Guo Onye nkwuputa anyi na homepage gbasara nghọta nke mkpughe nile nke onwe ebe a). Biko soro ederede na vidiyo n'usoro a gosipụtara ha na post dị n'okpuru. A ga-ewe gị site na ibe ozi Fr. Azọrọ na Michel enwetara site n’eluigwe, vidiyo na ndekọ ọdịyo nke ụfọdụ n’ime okwu ya sitere na nlọghachi azụ nke California (November 22-24, 2019), ma mepụta ihe odide nke ihe ngosi ya. Ana m akwado ka ị were oge gị chọpụta. Ihe omimi nwere ike igbanwe ndu, ma oburu na I kwere ka odi, odi kwa nkpa ma oburu na ighota ya. Ibugharị ihe a n'ụzọ ọ bụla nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya, ebe okwu na ozi ọ bụla sitere n’eluigwe na-ewuli nke ikpeazu.
Onye obula kwesiri ima na Fr. Michel anaghị akwado ozi nke ndị ọhụụ a na-ahụ anya (dịka John Leary, ma ọ bụ ozi a katọrọ nke "Maria Divine Mercy" ma ọ bụ "Army of Mary." Fada Michel anaghị akwado maka ịlanarị (ọ ka gbara ume ịnwe ọnwa ole na ole nke nri n'aka nke ezi uche nke na, ma eleghị anya, ọ dịghị onye nwere ike ịrụ ụka mgbe COVID-19 gasịrị), ọ naghị agwa ndị na-ege ya ntị ka ha gaa wuo "ebe mgbaba" anụ ahụ. Otú ọ dị, ọ na-ekwu na Chineke akpọwo ụfọdụ ndị ga-ewu ha, dịka ụgbọ Noa n'oge ya. Nkwupụta na-ezighi ezi gbasara Fr. Rodrigue dị na Internetntanetị ma gụkwuo nkọwa na isiokwu mbụ edepụtara n'okpuru.Anyị na-akpọ gị ka ị gụọ ha, ọ bụrụ na ị na-achọ nchekwa Fr Michel Ma ọ bụrụ na ị ga-achọ ịhapụ ihe niile ahụ wee banye n'obi nke Chineke gwara ya ka ọ kọọrọ ụwa maka oge anyị, mafere ọkwa ndị ahụ n'okpuru mgbe ị bịakwutere ha, ma bido na post nke akpọrọ "Akụkụ 1". Maka nduzi a pụrụ ịdabere na ya maka ihe nkuzi ya bụ n'ezie, biko rụtụ aka na okwu Fr. Michel n'onwe ya, nke ị nwere ike ige ntị ma gụọ n'ime ibe saịtị a.
Ka anyị bido. . . Ya mere onye bu Fr. Michel Rodrigue?
E si n'akwụkwọ kachasị ere, Ingdọ aka na ntị: Akaebe na amụma nke ọkụ nke akọ na uche:
Fr. Michel Rodrigue bụ onye guzobere na Abbott nke otu ọhụụ ọhụrụ nke Catholicka Katọlik kwadoro: The Apostolic Fraternity of St. Benedict Joseph Labre na diọcese Amos na Quebec, Canada (Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre). Amụrụ n'ime ezinụlọ Katọlik kwesịrị ntụkwasị obi nke ụmụ iri abụọ na atọ, Michel tolitere ogbenye. Ezinụlọ ya biri na obere ala ubi, ebe ọrụ siri ike na njem na-adịghị mma na Sunday Mass na ọtụtụ ụmụaka na-agba ịnyịnya mere ka ezinụlọ ya dịrị ndụ na ahụ na mmụọ.
Dịka St. Padre Pio na mkpụrụ obi ndị ọzọ a họpụtara, Chineke Nna malitere ịgwa Michel okwu na nwata. Fr kwuru, sị, “Mgbe m dị afọ atọ, ọ dị afọ atọ. Michel, “Chineke malitere ịgwa m okwu, anyị na-enwe mkparịta ụka mgbe niile. Echetara m mgbe m nọdụrụ n’okpuru nnukwu osisi dị n’azụ ụlọ anyị ma na-ajụ Chineke, ‘madenye mere osisi a?’
Chineke zara, "Mgbe m kwuru okwu ahụ, 'Mụ onwe m,' n'oge na-adịghị anya, e mere ka m hụ mbara ụwa, ụwa na onwe m, m wee ghọta na ọ bụ Ya mere ihe niile ma kee ya. Echere m na onye ọ bụla na-agwa Chineke Nna okwu. Site na mgbe afọ atọ ruo isii, Chineke nyere m ntụziaka n'okwukwe ma nye m ọzụzụ agụmakwụkwọ nke ọma. Ọ gwakwara m mgbe m dị afọ atọ na m ga-abụ onye ụkọchukwu. ”
Nna nyere Michel agụmakwụkwọ zuru oke dị na nkà mmụta okpukpe ahụ nke na mgbe ọ gara Grand Seminary nke Quebec mgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, o jiri akara A + nwalee na klas ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, Michel mụrụ akparamaagwa na mpaghara nke nkà mmụta okpukpe, dị ka mariology, pneumatology, ihe odide nke Ndị Nna Chọọchị, wee were akara mmụta doctorate gụsịrị ya na nkà mmụta okpukpe.
Ebe obibi ọhụrụ ebe obibi ndị mọnk ahụ
Mgbe o mechara ntọala ma jikwaa ebe obibi maka ndị ntorobịa na-enweghị ebe obibi, nke nyere ha nlekọta nke mmụọ na nke ime mmụọ, a họpụtara Michel Rodrigue onye ụkọchukwu diocesan mgbe ọ dị afọ iri atọ. Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye ụkọchukwu parish ruo afọ ise na north Ontario ruo mgbe bishọp ya chọpụtara na a ga-eji nkà ya rụọ ọrụ nke ọma n'ịme ndị ụkọ ọdịnihu. Fr. Mgbe ahụ, Michel ghọrọ onye ụkọchukwu Sulpician na-akụzi nkà mmụta okpukpe na Grand Seminary nke Montreal.
Na Christmas Eve, 2009, Fr. Okwa nchụ-aja nke Michel nwere ọnọdụ pụrụ iche. A kpọtere ya n’abalị site n’aka ọnụnọ St. Benedict Joseph Labre, onye guzoro n’akụkụ ihe ndina ya, na-ama jijiji n’ubu iji mee ka uche ya dịrị. Fr. Akpaliri Michel ma nu olu nke Nna, si, Guzo. So Fr. Michel biliri. “Gaa na kọmpụta.” O we rubere ya isi. “Gee ntị ma dee.” Ọ bụ mgbe ahụ ka Chineke bidoro ịtụpụta iwu niile maka ternka maka ihe oriri ọhụrụ, ngwa ngwa karịa Fr. Michel nwere ike pịnye. Ọ gha agwa Nna ya nwayọ!
Fr. Michel na nnata nke St. Benedict Joseph Labre jiri akwukwo nke onwu ya nweta onodu ya
Mgbe ahụ, Chineke na mberede whisked Fr. Michel gbabara na Diocese nke Amos, Quebec, ebe Ọ chọrọ ka enwe ebe obibi ndị mọnk, wee gosi ya n'ụzọ zuru ezu etu ụlọ obibi ndị mọnk ahụ dị. Nna gwara Fr. Michel na ọ ga-abụ onye guzobere ụlọ obibi ndị mọnk a. Ọ ga-ebido ọgbakọ ọhụrụ maka Churchka a kpọrọ Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre (The Apostolic Fraternity of St. Joseph Benedict Labre) iji wee kwado ndị ụkọchukwu maka ọdịnihu nke Churchka Katọlik, yana ngalaba nke abụọ maka ebe edoro nsọ. na nke atọ maka ezinụlọ. Fr. Na mbido Michel ji ụjọ na-atụ ụjọ, ebe ọ bụ na ọrụ ya dịnụ karịrị akarị, mana ọ ghọtara ozugbo na ịsị Nna ahụ abụghị nhọrọ. Taata nke mbụ n'ime ụlọ obibi ndị mọnk abụọ ka ewuola, etu esi nye ya iwu, ugbu a ọ chọkwara nkwado dị ukwuu iji mechaa ụlọ obibi nke abụọ mezuru site na ụbọchị Nna nyere ya: njedebe nke oge ọkọchị, 2020
Na Machị 28, 2020, Fr. Michel dere pịa ebe a ka ị gụọ akwụkwọ ozi ya nke Machị 26 n’ebe ndị na-enyere ya aka rụzuo ọrụ Onyenwe anyị nke ebe obibi ndị mọnk maka Churchka nke ọdịnihu. Ke leta kiet, enye ewet:
. . . Hụba ama eziokwu na ndị niile mara ọbịbịa nke Kraịst n’amara n’oge anyị bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke Meri, nne anyị. Ahoputara anyi maka oru di iche iche: irube isi na Muo Nso na nne anyi Meri na iguzo na njikere ma nwee ike inyere umunne anyi ndi nwoke aka ka ha banye na njem nke Nzuko. . .
Ndị mm hụrụ n'anya nke Chukwu, anyị na-agabiga ule. Nnukwu ihe omume nke ịdị ọcha ga-amalite ọdịda a. Jikere na ndi Rosary wepu aka n’aru Setan na ichebe ndi be anyi. Gbaa mbọ hụ na ị nọ n’ọnọdụ amara site n’ime ka nkwuputa gị niile nyere ụkọchukwu Katọlik. Agha ime mmụọ ga-amalite. Cheta okwu ndia: OZU ROSARY GA-AHU IHE OMA (nke putara ezigbo ihe)
-Dom Michel Rodrigue
(Mara: N’aka nke ukwu, Fada Rodrigue pụtara ihe pụtara ìhè, nke bara ụba. Abịa na ụbọchị ma ọ bụ oge akọwapụtara nke ọma, dịka nke dị n’elu, anyị na-arịọ ndị na - agụ akwụkwọ anyị ka ha jiri nghọta ha kọwaara anyị nke ọma dị ka Disclaimer na ibe anyị).
Fr. Michel jidesiri ọnụnọ St. Benedict Joseph Labre akwụkwọ mgbe ọ nwetasịrị asambodo nke ezigbo ya.
Chukwu nyere Fr. Michel Rodrigue nwere onyinye ọgụgụ isi na nke mmụọ pụrụ iche, dịka ịgwọ ọrịa, ịgụ mkpụrụ obi, ncheta foto (nke belatara ọtụtụ ọrịa siri ike na nkụchi obi asatọ!), Amụma, ọnọdụ, na ọhụụ. O nwere obi uto nke obi ya na ochi ya di njikere, ma n'otu oge ahu, ihe di mkpa banyere ihe nile nke Chineke. Ọ rụọ ọrụ dịka prọfesọ seminarị, onye nlekọta ụlọ ọgwụ, onye na-achụpụ mmụọ, ụkọchukwu parish, na nso nso a, dịka onye guzobere na Onye isi ndị isi nke nzukọ ụka ọhụụ na Quebec na-asụ French.
Nwaada anyị, n’onwe ya, akpọpụtala Fr. Michel Rodrigue, “Onye Ozi nke Oge Ọgwụgwụ.” Ọ bụ ole na ole, ma ọ bụrụ na ọ dị, enwetara ihe ọmụma dị otú ahụ ma nyere aka banyere ọdịnihu ụwa anyị ngwa ngwa. Fr. Ya mere, Michel nyere anyị nnukwu ọwa, nke na-ekpughe njikọta na mkpa amụma dịruru n'oge anyị, gụnyere ndị nke Akwụkwọ Nsọ. “Aghọtala m ugbu a! Ugbu a ka m hụrụ! ” Kwuo ndi nuru okwu. Michel na ndị buburu ụzọ gaa ederede amụma ma pụta na anya.
Okwu Fr. Ejiri Michel webụsaịtị a site na ndekọ nke ihe ngosi ya. Ejikọtara ụfọdụ n'ime okwu ya na otu isiokwu n'otu ebe, ma n'oge ụfọdụ, ntụgharị abụghị verbatim iji wee nwee ụtọ asụsụ Bekee.
Fr. Enwere ike iji leta zigara Michel na adres na-esote. Ọ gwaghị anyị ka anyị kwuo ihe ndị na-esonụ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ inye onyinye maka ebe obibi ndị mọnk ya, ị nwere ike ịme nyocha gaa FABL ma ziga ha ebe ahụ. Fr. Michel chọrọ ka ịmara na n’agbanyeghi na ọ nweghị ike ịzaghachi leta niile n’olu n’oge, ọ na-ezitere gị ịhụnanya ya na ekpere ya.
Ozi si Fr. Michel Rodrigue
Kedu onye na -egbochi ya?
Onye na -egbochi na -emegide Kraịst.
Fr. Michel - Setan, site na ndị nkịta ya na-achị ụwa, chọrọ iji ahịhịa ya nye gị nsogbu
Setan na-emegide onyinyo Chineke.
IKPEHE 1: Fr. Michel Rodrigue: Onye ozi nke Oge Ọgwụgwụ
Fr. Akụkọ ndụ Michel Rodrigue: Mgbe Michel dị afọ atọ, Chineke malitere ịgwa ya okwu, ha na-akparịta ụka mgbe niile. . .
NKEBI NKE 2: Fr. Michel Rodrigue - Ihe Omume na Medjugorje na Isi Ozi Meri
N'ịbụ onye prọfesọ seminarị maara nke ọma n'ọtụtụ ebe, Fr. Michel Rodrigue ekweghị na Medjugorje, rue mgbe Mary pụtara n’ihu ya duzie ya ebe ahụ.
NKEBI NKE 3: Fr. Michel Rodrigue - “Meri akpọworị Onyeozi nke Oge Ikpeazụ”
N’otu, a na m arịọ gị ka ị mee ihe niile ị nwere ike ime iji nyere nwa m nwoke, Michel aka, iji wuo ebe obibi ndị mọnk nke ga-eme ka ndị ụkọchukwu mata oge ọgwụgwụ. . .
IKPEHE 4: Fr. Chiko Pilere Pio na-akpọrọ Michel Rodrigue gaa na Eluigwe ma zute ezi na ezinaụlọ
Chineke Nna: "Ekwuru m ọtụtụ oge na m ga-echebe ụmụ m n'oge mkpagbu na ọchịchịrị."
NKEBI NKE 5: Fr. Michel Rodrigue - ịdọ aka na ntị, mkpagbu na ụka na-abanye n’ili
Maịkel Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi: "Taa, karịa mgbe ọ bụla, anyị na nne nke Chukwu kpee ekpere maka ndịozi nke ụbọchị ikpe a ka ha bilite!"
NKEBI NKE 6: Fr. Michel Rodrigue - Matiu 24 na Baịbụl kwuru n’oge anyị
Fr. Ozizi a kwuru na ụfọdụ amaokwu dị na Oziọma Matiu isi nke 24, dịka ha gbasara oge anyị, ọgwụgwụ oge.
NKEBI NKE 7: Fr. Michel Rodrigue - Akwụkwọ Apocalyptic nke Advent na-enyere aka ịkọwa ihe omume ga-abịa
Chineke Nna: "Soro agụ ụbọchị ụka nke ụlọ ụka Katọlik gị, ị ga-aghọta ọtụtụ ọrụm na ọtụtụ ihe na-abịa."
NKEBI NKE 8: Fr. Michel Rodrigue - Ezinụlọ Dị Nsọ: Nchebe site na Ọkụ Na-ada site na Eluigwe
Chineke Nna: "ahuhu sitere n’elu igwe apughi imebi ezi na ulo nke ndi Kristi dobere ma na-echebe site na ezinulo nke Holy."
Nkeji 9: Fr. Michel Rodrigue na Ekwensu
Akụkọ Fr. Michel Rodrigue ekwuola banyere ọgụ ya na ekwensu na ọrịa siri ike.
NKEBI NKE 10: Fr. Michel Rodrigue - Mmehie, Ọnwụnwa, na ningdọ Aka ná Ntị Na-abịanụ
Chineke Nna: "A ga-amata nwa m na ngosipụta nke ebube Ya nke ga - amụkwasị mbara igwe, ọ nweghịkwa onye ga - agbanahụ ya."
NKEBI NKE 11: Fr. Michel Rodrigue - Na-ekpe Ekpere Maka Ndị ved Hụrụ n’Anya
na-agwa ndị nwere nchegbu banyere nzọpụta nke ndị a hụrụ n'anya. Ọtụtụ na-ajụ m, “Nna, ụmụ m. Nna, ụmụ m. ”...
NKEBI NKE 12: Fr. Michel Rodrigue - Mgbe Wardọ Aka na Ntị na Agha Worldwa nke Atọ
Ndị mmadụ ga-eme mkpebi. Oge ebere ga-akwụsị, oge ikpe ziri ezi ga-amalite.
NKEBI NKE 13: Fr. Michel Rodrigue - Oge nke Ihe Mgbaba
Ozugbo ị doro ala gị na ụlọ gị nsọ, ugbu a ọ bụ mmụọ ozi nke Onye-nwe chebere ebe mgbaba gị.
NKEBI NKE 14: Fr. Michel Rodrigue - Ozi banyere ndị mmụọ ozi anyị na-eche nche ga-enyere anyị aka
Chineke Nna: "Oge ahụ dị n'ọnụ ụzọ gị, ọ bụ naanị mmụọ ozi na-eche gị ga-eduzi gị n'ụzọ mgbaba."
NKEBI NKE 15: Fr. Michel Rodrigue - Ozi si n’aka Nwanyị Nwanyị nke Knock
Obe nke nwa atụrụ ahụ ga-enwu ozugbo maka ...wa ...
NKEBI NKE 16: Fr. Michel Rodrigue - Otu esi edo ulo na ala gi ebe mgbaba
Water ga achọrọ mmiri ọorụorụ echichara achịcha na nnu nnu, nke kachasị ike karịa onye iro karịa mmiri a gọziri agọzi na nnu a gọziri agọzi.
Debe Ihe Ndekọ Njikọ nke Ezinaụlọ N’ụlọ Gị
Nchedo nke Iwu Ọkụ site na Ezinaụlọ…
NKEBI NKE 17: Fr. Michel Rodrigue - Ozi na 2020. Kpee Rosary. Ihe ịrịba ama ụgha na ndị amụma ụgha ga-abata na chọọchị.
Nwanyị a gọziri agọzi: "Ndị amụma ụgha ga-arụ nnukwu ihe ịrịba ama n'okpuru ike nke Setan. Ofdị ihe ịrịba ama a nwere ike ịbụ naanị obere oge karịa ụbọchị atọ."
Fr. Michel Rodrigue na-agbaji nkịtị ma na-aza ndị bishọp na ndị kwesịrị ntụkwasị obi
Achọrọ m ikwughachi ikwesị ntụkwasị obi m.
On Bishop Lemay’s Open Letter nke Septemba 3rd
Nghọtahie ndị e kwuru banyere ya na nkọwa ndị hiere ụzọ ka doo anya.
Fr. Achọghị Ozi Michel Rodrigue
Akwụkwọ dị nkenke na nkwupụta Bishop Robert Bourgon.
Nzaghachi nye Fr. Odide Joseph Iannuzzi na Fr. Michel Rodrigue, Nkebi 1
Ọ bụ eziokwu, dịka Fr. Iannuzzi na-ekwu, sị, "Chineke anaghị arụ ọrụ otu a"?
Akụkụ 2 nke Nzaghachi Fr. Isiokwu Joseph Iannuzzi na Fr. Michel Rodrigue – Na Ihe Mgbaba
Megide Fr. Nkwuputa nke Iannuzzi, ebe mgbaba nke anụ ahụ dị na "nke a na-ahụbeghị mbụ" na mkpughe nke onwe
Azịza nye edemede Dr. Mark Miravalle na Fr. Michel Rodrigue
nke Prọfesọ Daniel O'Connor dere
Nkwupụta Eziokwu na Regardinggha Banyere Fr. Michel Rodrigue
Ọ bụ ihe juru ebe niile ugbu a na ndị mmadụ na-ekwu ihe na-ezighi ezi na spreadntanetị na-agbasa ozi ụgha. Ọ bụghị ihe ijuanya na, "nkwupụta" ole na ole ...
OZI OZI. Ọ bụ Fr. Michel Rodrigue ezigbo? Eziokwu banyere Fr. Michel Rodrigue.
Isi nke nkọwa banyere Fr. Michel Rodrigue
Ọnye na-bụ Real Fr. Michel Rodrigue? Ingchọ Eziokwu
Echiche na Fr. Michel Rodrigue si Christine Watkins na-eme ka ihe doo anya.
Nkwupụta na Fr. Michel Rodrigue
Na Eprel 23, 2020, Fr. Michel Rodrigue gwara anyị na bishọp ya, Rev. Gilles Lemay, anaghị akwado Fr. Isi nke Michel…
Ihe na Maka gịnị?.
← Gịnị kpatara Eduardo Ferreira?
Gịnị Mere Anyị Ji Bụrụ Mkpụrụ Obi →
Ozi Ndị Ọhụ
Mkpụrụ Obi Eleghị Anya
Were ebe ichighaazu mebere na Fr. Michel Rodrigue
Ohu Chukwu Luisa Piccarreta
Simona na Angela
Oge nke Udo
Site N’nyemaka Anyị
Mkpụrụ Obi Ndị Ọzọ
Nchedo na Nkwadebe nke anụ ahụ
Oge nke Anti-Christ
Ingdọ aka na ntị, nbughachi, ọrụ ebube
Ndị mmụọ ọjọọ na ekwensu
Ọgwụ mgbochi, Ihe Otiti na Covid-19
Akàrà asaa nke Mkpughe
Valeria - Rịọ arịrịọ maka ọbịbịa nke Ọkpara m Nwere ike 14, 2022
Luz - Ị chọrọ nri nke Oriri Nsọ Nwere ike 14, 2022
Oku siri ike maka nchegharị Nwere ike 13, 2022
Gisella - Kpee ekpere maka Japan na China. . . Nwere ike 11, 2022
Luz – ịdọ aka ná ntị ahụ na-abịaru nso ngwa ngwa Nwere ike 11, 2022
Pedro - Kpee ikpere gị n'ekpere Nwere ike 10, 2022
Ọ bụ Luisa Piccarreta
Na-emegide Kraịst Ndapụ n’ezi ofufe onye katoliki Ọrụ ụgwọ ụka kọmitii nkwupụta mgbagwoju anya akakabarede obi ike Covidien-19 aghụghọ nkewa Oge nke Udo Oriri Nsọ okwukwe egwu Ìhè nke Akọ na Uche Obi Obi Anyi Jesus ikpe ziri ezi n'anya Mary ebere nne ọrịa udo Mkpagbu Popu ekpere -nchu-àjà amụma ọcha nchegharị Rosary Russia sacrament ule Mkpagbu Mmeri tụkwasị obi eziokwu ogwu agha Ịdọ aka ná ntị
Umu nnem n’ime Kristi,
Enwere m ọ Myụ dị ukwuu taa mgbe m nọnyeere gị maka ọrụ nke ụlọ obibi ọhụrụ a nke Nna anyị nke bi n’eluigwe gwara m ka m rụchaa. Aụrị na-enwe ọ joyụ n'ihi na afọ a bụ ụbọchị ncheta afọ 40 nke ịgụ akwụkwọ na Medjugorje. Ọ bụ nne anyị ka ọ na-ele anya, ọ na-emekwa ka anyị jide n'aka na oge ya na-abịa maka mmeri nke Obi Obi Ya.
Gịnị kpatara Chukwu Nna na Ọkpara na mmụọ nsọ ji họrọ anyị ka anyị mata, n’oge ndụ anyị, ọrụ a raara nye ịhọpụta ndị isi nchụàjà ndị ga-eduru ndị nke Chineke n’oge nke ga-abịa? Kedu ihe kpatara anyị jiri tinye n'ọrụ ngo nke Nna anyị iji jee ozi n'ọchịchị nke obi dị nsọ nke Jizọs na mmeri nke Obi Obi Meri.
Nke a ọ́ bụghị naanị ajụjụ ịmata ihe? Azịza ya dị nfe: ọ bụ nnabata nke ihe omimi dị nsọ nke ọrụ nne anyị, onye Nna nwere obi ebere họpụtara maka ọbịbịa nke Jizọs n'ụwa. Dịka onye dị nsọ John Paul nke Abụọ dere bụ Redemptoris Mater:
1. Nne nke Onye Mgbapụta nwere ọmarịcha ọnọdụ na atụmatụ nzọpụta, maka “mgbe oge ahụ zuru, Chineke zipụrụ Ọkpara ya, nke nwanyị mụrụ, amụrụ n'okpuru iwu, ka ọ gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee nata nkuchi dị ka ụmụ. Ma n'ihi na unu bụ ụmụ, Chineke zitere mmụọ nke Ọkpara ya n'ime obi anyị, na -eti mkpu, 'Aba! Nna! '”(Gal. 4: 4-6)
Site n'okwu ndị a nke Pọl onyeozi, nke ọgbakọ Vatican nke Abụọ na -ebido na mbido ọgwụgwọ nke Virgin Mary gọziri agọzi, ọ masịrị m ịmalite ịtụgharị uche m na ọrụ Meri na ihe omimi nke Kraịst na n'ịrụsi ọrụ ike na n exemomi ya. ọnụnọ na ndụ nke Ụka. N'ihi na ha bụ okwu na -emekọ ọnụ n'ịhụnanya nke Nna, ozi nke Ọkpara, onyinye nke mmụọ nsọ, ọrụ nwanyị nke amụrụ Onye Mgbapụta, yana njikọ chi nke anyị, n'ime ihe omimi nke “izu oke. oge. ”
'Oge a zuru oke' na-egosi oge Nna anyị debere maka ịbụ Onye Kraịst, n'otu oge ahụ na-ekpughe njem nke Nzukọ-nsọ, na-eweta nzọpụta site n'aka Jizọs Kraịst. Ihe omimi omimi ozo metụtara nmekorita nke Kraist: ihe omimi nke Pentikost. N’etiti ihe omimi a, nne nke Chukwu nonyere ndi-ozi. Nke mbu, site n’aka Fiat ya, Kraist, onye isi nke nzuko, batara n’uwa, ma site na ajuju ya na ulo uka, nke ahu bu aru Kraist, “oge zuru” n’esepu rue mgbe Kraist ga abia ozo!
Hụba ama eziokwu na ndị niile mara ọbịbịa nke Kraịst n’amara n’oge anyị bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke Meri, nne anyị. Ahoputara anyi maka oru di iche iche: irube isi na Muo Nso na nne anyi Meri na iguzo na njikere ma nwee ike inyere umunne anyi ndi nwoke aka ka ha banye na njem nke Nzuko.
Anyị ejikọtara aka rụọ ọrụ a, anyị ga-arụzu ya n'ụzọ nke Nwa nwanyị na-amaghị nwoke gosipụtara anyị Ulo anyi gha buru ebe mgbaba, ala anyi gha amita nkpuru, ubochi nke Jehova ga - adakwasi anyi. Tupu ihe omume ndị a niile, anyị ga-ekwupụta okwukwe anyị. Njem anyị ga-abụ njem nke ụka, na Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-eso anyị. O nyela ogwe-aka maka nchebe nke anyi. Oke onodu nwanyi nke Oke Ugwu Kamel, Onyinye Ebube, Rosary, ubochi ise nke Satọde nke onwa, oku a na -akpọ maka nkwụchi obi obi ya na nke dị nsọ nke Jizọs bụ onyinye sitere n’eluigwe. Ma ugbua, Jizọs chọrọ ka ndị ụkọchụ ya kwadebe ma dị njikere ịbịakwute ndị Ya: Nzukọ Ya. Ànyị na-arụ ụka megide nke a? Mba. Anyị dị njikere ime uche ya na ịbụ ndị ohu dị obi umeala, dị ka Meri kụziiri anyị n'oge ndụ ya na n'ihe ọmụmụ ya niile.
Ndi m hụrụ n’anya nke Chukwu, anyị na-agafe ule. Ihe omume dị ọcha ga-amalite ọdịda a. Dịrị njikere na Rosary iji wepụta Setan na iji chebe ndị anyị. Gbaa mbọ hụ na ị nọ n’ọnọdụ amara site n’inyela onye ụkọchukwu Katọlik nkwupụta nzuzo gị. Agha ime mmụọ ga-amalite. Cheta okwu ndị a: OFBỌRỌ N’ỌR R AHARY AHILL ga-ahụ ihe dị egwu!
Dom Michel Rodrigue mara mma
A mụrụ Alicja Lenczewska onye Poland, na Warsaw na 1934 wee nwụọ na 2012, a na -etinye ndụ ọkachamara ya dịka onye nkuzi na onye isi otu ụlọ akwụkwọ dị na Szczecin nke ugwu ọdịda anyanwụ. Ya na nwanne ya nwoke, ọ malitere isonye na nzukọ nke Katọlik Charismatic Renewal na 1984 mgbe nne ha nwụsịrị. Na Machị 8, 1985, ndụ Alicja gbanwere nke ukwuu mgbe ọ hụrụ Jizọs ka ọ na -eguzo n'ihu ya mgbe ọ natasịrị Oriri Nsọ. Ọ bụ n'ụbọchị a ka ọ malitere idekọ mkparịta ụka omimi ya. Mgbe ọ lara ezumike nka na 1987, ọ ghọrọ onye otu ezi na ụlọ nke ịhụnanya nke ndị akpọgidere n'obe, na -eme nkwa mbụ ya na 1988 na nkwa ebighi ebi na 2005. Ọ na -arụkwa ọrụ n'izisa ozi na ịhazi njem ala nsọ na Italy, Ala Nsọ, na Medjugorje. . Na 2010, nkwukọrịta ihe omimi ya bịara na nkwubi okwu, afọ abụọ tupu ọ nwụọ n'ọrịa kansa na St. John's Hospice, Szczecin, na Jenụwarị 5, 2012.
Na-agba ọsọ karịa peeji 1000 ebipụtara, ebipụtara akwụkwọ akụkọ ime mmụọ nke Alicja nke nwere mpịakọta abụọ (Akaebe (1985-1989) na Ndụmọdụ (1989-2010) mgbe ọ nwụsịrị, n'ihi mbọ nke Achịbishọp nke Szczecin, Andrzej Dzięga, onye guzobere kọmitii nkà mmụta okpukpe. maka inyocha edemede ya, nke Bishọp Henryk Wejman nyere Imprimatur. Kemgbe ha pụtara na 2015, ha abụrụla ndị kacha ere ahịa n'etiti ndị Katọlik Polish, ndị ụkọchukwu na-ekwukarịkwa ya n'ihu ọha maka nghọta ha na-abata n'ime ndụ ime mmụọ na mkpughe ha gbasara ụwa dị ugbu a.
Otu nwoke onye North-America, onye choro ka a ghara ịma aha ya, onye anyị ga-akpọ Walter bụ onye na-ekwu okwu mkparị, onye na-etu ọnụ, na onye na-akwa emo n'okwukwe Katọlik, ọbụna ruo n'ókè nke ịdọpụ chaplet mama ya n'aka aka ya na-achụsasị ha. n'ofe ala, gabigara mgbanwe miri emi.
Otu ubochi, enyi ya na onye oru ya, Aaron, onye omere ntughari na Medjugorje, nyefere Walter akwukwo nke ozi Mary's Medjugorje. Kuru ha gaa na Katidral nke Sacrament Ngozi n’oge ezumike nke ehihie ya n’ebe ọrụ ya dị ka onye na-ere ala na ụlọ, o riri ha ma mee ngwa ngwa bụrụ nwoke dị iche.
N’oge na-adịghị anya, ọ gwara Erọn, “Enwere mkpebi m ga-eme na ndụ m. Achọrọ m ikpebi ma m ga-edo ndụ m nye Nne nke Chukwu. ”
“Nke ahụ dị mma, Walter,” ka Aaron zara, “mana ọ bụ elekere itoolu nke ụtụtụ, anyị nwekwara ọrụ ime. Anyị nwere ike ikwu maka nke ahụ ma emechaa. ”
"Ee e, ọ dị m mkpa ime mkpebi ahụ ugbu a," Walter wee pụọ.
Otu awa mgbe nke ahụ gasịrị, ọ laghachiri n'ọfịs Erọn na-amụmụ ọnụ ọchị na ọchị ma sị, "Emere m!"
“Did mere gịnị?”
“Edere m ndụ m nye Nne-anyi Nwaanyị.”
Otu a ka ọ siri malite njem na Chukwu na Nwanyị nwanyị nke Walter na -atụghị anya ya. Mgbe Walter na -anya ụgbọala si ọrụ lọta otu ụbọchị, mmetụta siri ike n'obi ya, dị ka nrekasi obi nke na -afụghị ụfụ, kpuchiri ya na mberede. Ọ bụ mmetụta nke obi ụtọ siri ike nke na ọ na -eche ma ọ ga -enwe nkụchi obi, ya mere ọ kwụsịrị n'okporo ụzọ awara awara. Mgbe ahụ ọ nụrụ olu ọ kwenyere na ọ bụ Chukwu Nna: “Nne a gọziri agọzi ahọrọla gị ka ị bụrụ ngwa ọrụ Chineke. Ọ ga ewetara gị nnukwu ọnwụnwa na nnukwu nhụjuanya. Ị dị njikere ịnakwere nke a? ” Walter amaghị ihe nke a pụtara -naanị na a na -arịọ ya ka ejiri ya mee ihe n'ụzọ ọrụ nke Chukwu. Walter kwetara.
N’oge na-adighi anya, Nne anyi di aso bidoro igwa ya okwu, karisia mgbe o natara Oriri Nsọ. Walter na-anụ olu ya site na mpaghara ime-n'okwu ndị doro anya dị ka nke ya-ọ malitere iduzi, ịkpụzi, na ịkụziri ya. N’oge na-adịghị anya, Nwanyị anyị nwanyị bidoro isi n’otu ya na-agwa ndị otu ekpere kwa izu na-eto ma na-eto.
Ugbu a ozi ndị a, ndị na-agba ume, na-akpụzi, na-ama aka ma na-ewusi ndị fọdụrụnụ kwesịrị ntụkwasị obi n'oge ndị a, oge ọgwụgwụ, dị maka ụwa. Na mkpokọta, ha dị na akwụkwọ: Nwanyị Na-egosi Wayzọ: Ozi Eluigwe maka Oge Nsogbu Anyị ma ọtụtụ ndị ụkọchukwu amụọla nke ọma ma chọpụta na ha enweghị njehie ozizi niile ma nwee obi ha niile site na Achịbishọp Emeritus Ramón C. Argüelles nke Lipa.
Gịnị kpatara Eduardo Ferriera?
Amụrụ na 1972 na Itajai na steeti Santa Catarina na Brazil, Eduardo Ferreira hụrụ onyogho nke Our Lady of Aparecida na mbara èzí nke ezinụlọ ahụ na Jenụwarị 6, 1983. Na Ọktọba 12, 1987, ụbọchị anọ mgbe ụkọchukwu mbụ ya gasịrị, Eduardo na nwanne ya nwanyị Eliete na-ekpe ekpere n'ihu ihe oyiyi a mgbe Eduardo hụrụ ka ọkụ na-acha anụnụ anụnụ si na ya pụta na-enwu n'ime ụlọ ahụ. Na February 12, 1988 o nwere ọhụụ mbụ ya banyere Virgin, hụ ya ka ọ dị na grotto jupụtara na rose, ji ụkwụ ya na-ejide agwọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ngosipụta pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị ruo Jenụwarị 1, 1996, ọnwa abụọ ka Jizọs zụsịrị ozi mbụ n'ụlọ ọgwụ ebe Eduardo nọọsụ na-arụ ọrụ.
Malite na February 1997 wee gaa n'ihu, ngosipụta nke Eduardo Ferreira na-eme mgbe niile na 12th nke ọnwa ọ bụla yana oge ụfọdụ na ụbọchị ndị ọzọ. N'ime oge ọ natara stigmata na February 2, 1996, Eduardo zutere onye ọhụụ nke abụọ, Alceu Martins Paz Junior (onye amụrụ na 1977), onye ahụmịhe omimi ya gụnyere ịhụ Virgin na July 9, 1996. boysmụ nwoke abụọ malitere ikwusa ozi ọma ọnụ mana o nwetara mmegide kpụ ọkụ n'ọnụ, na-anwa Eduardo iyi egwu igbu ya, gụnyere ndị òtù ezinụlọ ya. Mgbe oge nke ọ na-enweghị ebe obibi na-enweghị atụ, Eduardo mechara biri na São José dos Pinhais na steeti Paraná na 1997, ebe ọ ka bi, na ebe ewuru ụlọ nsọ, dị ka a pụrụ ịhụ na vidiyo nke ngosipụta.
Meri pụtara na ngosipụta ndị a dị ka “Rosa Mystica”, aha nke ọ pụtara ka ọ na-elekọta Pierina Gilli na Montichiari-Fontanelle (1947), ihe omume nke ngosipụta nke Brazil na Eduardo na Junior na-ekwu ugboro ugboro. Egosipụtala ngosipụta ahụ site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe atụghị anya nke yiri nke a hụrụ na saịtị ndị ọzọ yiri ya: mmụba ọbara sitere na akpụrụ akpụ nke nwa agbọghọ na -amaghị nwoke (dịka na Civitavecchia ma ọ bụ Trevignano Romano), “ịgba egwu nke anyanwụ” (dịka na Fatima ma ọ bụ Medjugorje), onyonyo nke Mary na -enweghị ike 'ebipụta' na petals (dịka ọ dị na Lipa na Philippines na 1948)… Na ozi ndị ahụ, anyị na -ahụkwa ọtụtụ ihe ngosi Marian n'oge gara aga. Ụka kagburu ụfọdụ n'ime ha (Montichiari, Ghiaie di Bonate, Biding, Kerizinen…), mana agbanyeghị na ọ dọtara mmasị na -eto eto nke ndị nyocha siri ike metụtara ịtọlite ​​akụkọ ihe mere eme na ịhazigharị ihe omimi nke nwere ike bụrụ onye a mara ikpe na -ezighi ezi.
Isi okwu nke ozi nye Eduardo Ferreira (ihe karịrị 8000 ruo ugbu a) bụ ihe jikọrọ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke amụma amụma ndị ọzọ dị taa. Ha enwetawo nlebara anya dị ukwuu na ọnwa ndị na-adịbeghị anya n'ihi ozi dị ogologo nke onye ọhụụ ahụ natara na Heede, Germany na 2015, ebe saịtị ahụ pụtara ụmụaka anọ tupu Agha IIwa nke Abụọ. Ozi a, elere anya ugboro atọ na YouTube, yiri ka ọ buru amụma banyere nsogbu ahụike zuru ụwa ọnụ ugbu a.
Na 1994, ngosipụta nke Jisos, Nwanyị anyị, na St. Joseph nye Edson Glauber, afọ iri abụọ na abụọ, na nne ya, Maria do Carmo. Na 2021, Edson nwụrụ site na obere ọrịa na-egbu egbu.
Ihe ngosipụta a bịara mara dị ka Itapiranga pụtara, akpọrọ aha obodo ha dị na oke ọhịa Amazon nke Brazil. Nwanyị Mary Virgin ahụ kọwara onwe ya dị ka “Nwanyị Rosary na nke Udo,” ozi ndị ahụ na-ekwusi ike ikpe ekpere Rosary kwa ụbọchị-ọkachasị rosary ezinụlọ, ịgbanyụ telivishọn, na-aga Confession, Eucharistic Adoration, nkwenye na “ Ezi Churchka bụ Roman Catholic Apostolic Church, na na a "iyi nke chastis" na-eru nso. Nwanyị anyị gosipụtara Edson eluigwe, hel na pọgatrị, ya na Nwa ya nwoke, nyere Maria do Carmo nkuzi dị iche iche maka ezinụlọ.
Ọzọkwa, Nwanyị nwanyị anyị rịọrọ ka a gaa ozi ọma nke Ndị Kraịst n'ụzọ pụrụ iche n'ebe ndị ntorobịa nọ na iji wuo ụlọ ekpere dị mfe maka ndị njem ala nsọ, yana ụlọ ebe a na-esi esi nri na Itapiranga maka ụmụaka nwere mkpa.
Nna Edson, onye bụ onye a violentụrụma na-egbu egbu tụgharịrị n'ihi mmetụta nke ngwa ahụ, ka a ga-ahụta ikpere n'ala ikpere ya n'isi ụtụtụ, na Lady anyị kwuru banyere ala buru ibu o nwere nke ya na Chineke. Eze nwanyi nke Rosary metu aka ya site na mmiri aka ya na-esite na ebe a ruputa ihe na Itapiranga ma rio ya ka ewetara ya ndi aru nri oria. A kọwawo ọtụtụ ọrịa ọrụ ebube, ndị dọkịta nyochachara nke ọma, ma zigara ha fectlọ Ọrụ Apostolic nke Archdiocese nke Itacoatiara. Ọ rịọkwara ka e wuo otu ụlọ ụka nke a ka guzobe.
N'afọ 1997, ozi nke Itapiranga oge ụfọdụ kwusiri ike na ọ ga-asọpụrụ St. Joseph's kasị ọcha obi, Jizọs rịọkwara ka e mee ka ememme ụbọchị na-esote bata n'ime Churchka:
Achọrọ m ka ụbọchị oriri mbụ nke obi m dị nsọ na nke obi Meri ghara ịhapụ, ka e nye ha emume nke obi kachasị ọcha nke St. Joseph.
Na Wenezdee, Juun 11, 1997, bụ ụbọchị ahụ oriri nke a chọrọ, nne a gọziri agwaa kwuru nke a, na-ekwu maka usoro ịtụle mmụọ nsọ nke mere na Ghiaie de Bonate na ugwu duringtali, n'ime afọ 1940— ihe nlere anya nke ntinye obi nye St. Joseph gosikwara:
Umu nnem, mgbe m pụtara na Ghiaie di Bonate na Jizọs na St. Joseph, Achọrọ m igosi unu na mgbe emechara n’uwa nile kwesiri inwe ihunanya na obi Kachasị Ọcha nke St. Joseph na Holy Holy, n’ihi na Setan ga-alụso ezinụlọ ọgụ dị egwu na njedebe nke oge a, na-ebibi ha. Mana m na-abịa ọzọ, na-eweta amara nile nke Chineke, Onye-nwe-anyị, inye ha ezi-na-ụlọ niile kachasị mkpa na nchekwa nke Chineke.
Dị ka ọ dị na ngwa Marian ndị ọzọ, dịka na Fatima na Medjugorje, Nwanyị nwanyị anyị kpughere nzuzo nzuzo Edson banyere ọdịnihu nke Chọọchị na ụwa, yana ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ ga-eme n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na agbanweghị ndị mmadụ. Ugbu a, enwere ihe nzuzo itoolu: anọ metụtara Brazil, abụọ maka ụwa, abụọ maka ,ka, na otu maka ndị na-aga n'ihu ibi ndụ mmehie. Nwaanyị anyị gwara Edson na ọ ga-ahapụ nke a na-ahụ anya n’elu Ugwu nke ọzọ n’akụkụ ụlọ ekpere dị na Itapiranga.
N’October 4, 1996, mgbe a na-egosi ya n’obe obe n’elu ugwu n’akuku ulo uka, Nwa agbọghọ a kwuru na:
“Nwa nwoke m hụrụ n'anya, achọrọ m ịgwa gị ụnyaahụ a ma gwa ụmụ m niile ihe dị mkpa iji bie ndụ. Maka ndị na-ekweghị, achọrọ m ịgwa ha na otu ụbọchị, ebe Cross a dị, m ga-enye ihe ịrịba ama a na-ahụ anya, mmadụ niile ga-ekwere n'oge ọnụnọ nwa m na ebe a na Itapiranga, mana ọ ga-egbu oge maka ndị nwere adịghị atụgharị. Nchigharị ga-abụrịrị ihe! N’ebe niile m pụtarala ma gosipụta n’ihu, ana m akwado ngwa echiche m ka obi abụọ ghara ịdị, ebe a na Itapiranga, a ga-egosi na ekpughere m nke Eluigwe. Nke a ga - eme mgbe ngwa ọgụ ebe a na Itapiranga ga - akwụsị. Mmadụ niile ga-ahụ ihe ịrịba ama enyere na obe a. Ha ga-echegharị na ha egeghị m ntị, maka na-achị ọchị na ozi m na ndị ozi m, ma ọ ga-abụ oge gafeworo n'ihi na ha ga-ekpochapụ ihu ọma m. Ha aghafuola oge a ga-azoputa ha. Na-ekpe ekpere, na-ekpe ekpere, na-ekpe ekpere! ”
Dom Carillo Gritti, Bishọp nke diọcese nke Itacoatiara, kwadoro usoro ngosipụta nke 1994-1998 dị ka “ike karịrị nke mmadụ” sitere na Mee 31, 2009 ma jiri aka ya tọọ ntọala isi ebe nsọ ọhụrụ na Itapiranga na Mee 2, 2010. Ozi ndị ahụ. nye Edson Glauber, nke ihe karịrị peeji 2000, na -akwado nke ukwuu na ọtụtụ amụma ndị ọzọ a pụrụ ịtụkwasị obi, ma nwee akụkụ eschatological siri ike, abụrụla ọtụtụ ihe ọmụmụ. Onye ndu Mariologist, Dr. Mark Miravalle nke Mahadum Steubenville nyefere ha akwụkwọ, nke a kpọrọ Obi ato ato: Akwukwo ozi nke Jisos, Mark, na Joseph sitere na Amazon.
Kemgbe Dom Gritti nwụrụ na 2016, enwere esemokwu na -edobebeghị n'etiti diocese nke Itacoatiara na Association nke Edson Glauber na ezinụlọ ya guzobere iji kwado iwu ebe nsọ. Onye nchịkwa dayọsis ahụ kpọtụrụ ọgbakọ maka ozizi nke okwukwe wee nweta nkwupụta na 2017 ka CDF wee ghara ịtụle ihe ngosipụta sitere n'ike mmụọ nsọ, ọkwa nke Archdiocese nke Manaus na -echekwa. CDF, n'okpuru Kadịnal Gerhard Ludwig Müller n'oge ahụ, ekwuteghị onye ọhụ ụzọ nke abụọ, nne Glauber, Maria do Carmo, onye bishọp Gritti nwụrụ ugbua zutere nkwado.
Nyere na anabataghị ngosipụta nke ọma (mana anaghị akatọ ya nke ọma), enwere ike jụọ ya ihe kpatara na anyị ahọrọla igosipụta ihe Edson Glauber natara na webụsaịtị a. N'ebe a ekwesịrị ikwu na, ọ bụ ezie na a ga -elele nkwado bishọp mbụ ahụ anya ka akagburu, nkwupụta CDF abụghị teknụzụ nkatọ "ngosi", na ọtụtụ ndị na -ekwu okwu welitere ajụjụ gbasara usoro iwu nke omume onye nchịkwa Diocesan. . Na mgbakwunye, usoro iwu nke CDF mere na -egbochi 1) nkwalite Liturgical nke ozi Edson, 2) “mgbasa ozi sara mbara” nke ozi ya site n'aka Edson n'onwe ya ma ọ bụ 'Association' ya na Itapiranga, na 3) ịkwalite ozi n'ime Onye isi oche nke Itacoatiara. Anyị na -anọgide na -erube isi na ntuziaka ndị a niile; na, ọ bụrụ na a katọọ ozi ya n'ọdịniihu, mgbe ahụ anyị ga -ewepụ ha na webụsaịtị a.
Ọ bụ ezie na Dr. Miravalle wepụrụ akwụkwọ ya mgbe ọ mụtasịrị akwụkwọ CDF, ọ dịkwa mma ịmara na ọtụtụ webụsaịtị gburugburu ụwa na -egosipụta ihe amụma e boro ebubo nke amaara maka ikwesị ntụkwasị obi ha na nkuzi ụka ka kpebiri na ha ga -aga n'ihu na -ebipụta nsụgharị nke ozi nke Itapiranga. Enwere ike ịkọwa nke a nke ọma n'eziokwu, n'oge ndụ Dom Carillo Gritti, ọdịdị Itapiranga nwere nkwado nnabata pụrụ iche. Ọzọkwa, ịdị ngwa nke ọdịnaya ozi bụ nke na -akwụsị ịgbasa ihe a ruo mgbe mkpebi ikpe Edson Glauber (nke nwere ike were ọtụtụ afọ) ga -etinye ọnụ mechie olu eluigwe n'oge ọ kacha dị anyị mkpa ịnụ ya.
(1913-1985) Nwunye, Nne, Mystic, na Onye guzobere Flame of Love Movement
Elizabeth Szántò bụ onye akụkọ ifo ndị Hungaria mụrụ na Budapest na 1913, onye biri ndụ ịda ogbenye na ihe isi ike. Ọ bụ nwa nwoke kachasị okenye na naanị ya abụọ ejima-na-ejima nke ụmụnne iji bie ogo. Mgbe ọ dị afọ ise, nna ya nwụrụ, mgbe ọ dị afọ iri, zigara Elizabeth ka ọ gaa Willisau, Switzerland ka ya na ezinụlọ na-eme ihe ọma. Ọ laghachiri Budapest nwa oge mgbe ọ dị afọ iri na otu ịnọnyere ilekọta mama ya nke na-arịa ezigbo ọrịa ma dinara n'ihe ndina. Otu ọnwa mgbe nke a gachara, Elizabet chọrọ ịbanye ụgbọ oloko si Austria na elekere iri nke ụtụtụ iji wee laghachite na ezumike Switzerland ndị kpebiri ịkpọrọ ya. Ọ nọ naanị ya ma hie ụzọ n'ọdụ ụgbọ elu na elekere 10 nke abalị Otu di na nwunye na-eto eto kpọghachiri ya Budapest ebe ọ nọrọ oge ndụ ya niile ruo mgbe ọ nwụrụ na 00.
N'ịbụ onye bi nwa mgbe agụụ na-agụ agụụ, Elizabeth rụsiri ọrụ ike iji bie ndụ. Ugboro abụọ, ọ nwara ịbanye n'ọgbakọ okpukpe mana a jụrụ ya. Oge mgbanwe bịara n’August, 1929, mgbe a nabatara ya ịbụ onye uda na parish ma zute Karoly Kindlemann, onye na-a chụ sịga. Ha lụrụ na Mee 25, 1930, mgbe ọ dị afọ iri na isii, ọ dị iri atọ. Ha niile mụtaara ụmụ isii, mgbe di m na nwunye ha lụchara afọ iri na isii, di ya nwụrụ.
Ọtụtụ afọ sotere, Elizabeth gbalịsiri ike ilekọta onwe ya na ezinụlọ ya anya. Na 1948, Communist Nationalization nke Hungary bụ nna ukwu nwere obi ọjọọ, a chụrụ ya n'ọrụ mbụ ya maka inwe ihe oyiyi Atụrụ ahụ gọziri agọzi n'ụlọ ya. Mgbe nile Elizabet bụ onye ọrụ uchu, o nwetụghị ihe bara uru ọ na-arụ ọrụ dị mkpụmkpụ ya, ebe ọ na-adọga inye ezinụlọ ya nri. N’ikpeazụ, ụmụ ya niile lụrụ nwanyị, ka oge na-agakwa, sonyere ya, na-akpọrọ ụmụ ha.
Ndụ ekpere nke Elizabet mere ka ọ bụrụ ezigbo onye Kamel, na 1958 mgbe ọ gbara afọ iri anọ na ise, ọ banyere n'ọchịchịrị afọ atọ. N'ime oge ahụ, ọ malitekwara iso Onye-nwe nwee mkparịta ụka chiri anya site na mpaghara mpaghara, na-esote mkparịta ụka na Nwa agbọghọ ahụ amaghị nwanyị na mmụọ ozi ya. Na Julaị 13, 1960, Elizabeth bidoro idepụta akwụkwọ nke arịrịọ Onyenwe anyị. Afọ abụọ n'ime usoro a, o dere, sị:
Tupu m nweta ozi site n'aka Jizọs na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, enwetara m mmụọ nsọ a: 'must ga-abụrịrị ndị na-achọghị ọdịmma onwe gị, n'ihi na anyị ga-enyefe gị nnukwu ozi, ị ga-agbadokwa ọrụ ahụ. Agbanyeghị, nke a ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na ị na - eche naanị ọdịmma onwe gị, na - ahapụ onwe gị. Enwere ike inye gị ozi ahụ naanị ma ịchọrọ ya site na nnwere onwe gị.
Azịza Elizabeth bụ “Ee,” sitekwa na ya, Jizọs na Meri bidoro mmegharị nke Nzukọ-nsọ ​​n'okpuru aha ọhụrụ enyerela nnukwu ịhụnanya ahụ Meri nwere maka ụmụ ya niile: “Ire nke ihunanya.”
Site n'ihe ghọrọ Akwụkwọ edemede mmụọ, Jizọs na Meri kuziiri Elizabet, ma ha na-akuzi ndi kwesiri ntukwasi obi na nka nke ịta ahụhụ maka nzọpụta nke mkpụrụ obi. E kenyere ọrụ maka ụbọchị nke izu, nke gụnyere ikpe ekpere, ibu ọnụ, na ike abalị, na nkwa ndị mara mma dị na ya, nwere ihu ọma pụrụ iche maka ndị nchụàjà na mkpụrụ obi na pọgatrị. N’ozi ha, Jizọs na Meri kwuru na ire nke ịhụnaanya nke obi Meri bụ amara kachasị ukwuu e nyere mmadụ kemgbe ụwa. Ma n’ọdịn’oge dị anya, ire ya ga-erechapụ ụwa niile.
Cardinal Péter Erdő nke Esztergom-Budapest, Primate nke Hungary, guzobere kọmitii iji mụọ ihe Akwụkwọ edemede mmụọ na ihe ngosi dị iche iche ndị bishọp mpaghara gburugburu ụwa nyere Ndị Fọd nke movementhụnanya, dị ka mkpakọrịta nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Na 2009, kadinal bụghị naanị nyere imprimatur ka Akwụkwọ edemede mmụọ, mana ghọtara na akụkọ omimi nke Elizabeth na ederede ya dị ka ezigbo, "onyinye nye “ka." Na mgbakwunye, o nyere nkwado nke ngalaba Flame of Love, nke na-arụ ọrụ n'ime theka kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu ahụ na-achọ nnabata ọzọ ka Ndị otu Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi. Na June 19, 2013, Pope Francis nyere ya ngọzi nke Apostolic.
E si n'akwụkwọ kachasị ere, Ingdọ aka na ntị: Akaebe na amụma nke ọkụ nke akọ na uche.
Oku, Mystic, Exorcist, Onye guzobere na Onye isi General nke Apostolic Fraternity of Saint Benedict Joseph Labre
(Iwu tọrọ ntọala na 2012)
Onye ụkọchukwu ahụ ị ga-agụ maka ya, ọ dị mwute ikwu na ọ bụ ya kpatara ọtụtụ ebubo ụgha. Ndị a na-agụrụ nkọwa ndị ọzọ Ebe a. Mmadu niile kwesiri ima na Fr. Michel nwere ọ bụghị na -akwado ozi nke ndị ebubo ebubo ịhụ (dịka John Leary, ma ọ bụ ozi amachibidoro nke “Maria Divine Mercy” ma ọ bụ “Ndị agha Mary”). Fr. Michel anaghịkwa akwado maka ịlanarị (ọ gbara naanị ume ka enwe nri ọnwa ole na ole n'aka nke nwere ike bụrụ na ọ nweghị onye ga-arụrịta ụka mgbe COVID-19 gasịrị), ọ naghịkwa agwa ndị na-ege ya ntị ka ha gaa wuo anụ ahụ " ebe mgbaba. ” N'ikpeazụ, asịrị na Diocese ya 'akatọla' ya bụ ụgha kpamkpam; ma ya na Fraternity ọ tọrọ ntọala nọ na Ụka ​​nke ọma ma nọrọkwa na nrube isi zuru oke nye Ụka Ecclesiastical, nke Fr. Michel enwetala ọtụtụ ụdị nkwado.
Enwere ọtụtụ asịrị ụgha na -agbasa na ntanetị na -ekwu na Fr. Michel kwuru ihe ndị, n'eziokwu, ọ na -ekwubeghị. Maka ntuziaka a pụrụ ịdabere na ya maka ihe nkuzi ya bụ n'ezie, biko rụtụ aka n'okwu ndị o kwuru n'ezie, nke ị nwere ike ige ntị n'ime ibe saịtị a, nke nwere Fr. Nkwenye doro anya nke Michel biputere ebe a.
Edere ihe ndị a na akwụkwọ ndị kachasị ere, Ingdọ aka na ntị: Akaebe na amụma nke ọkụ nke akọ na uche:
Fr. Michel Rodrigue bụ onye guzobere na Abbott nke usoro okpukpe ọhụrụ nke Chọọchị Katọlik kwadoro: Apostolic Fraternity nke St. Benedict Joseph Labre na Diocese nke Amos na Quebec, Canada. Amụrụ na ezi ezinụlọ Katoliki nwere ụmụ iri abụọ na atọ, Michel toro ogbenye. Ezinaụlọ ya bi na obere ala ugbo, ebe ọrụ siri ike na njem na-agwụ ike na Sunday Mass na ọtụtụ ụmụaka na-agba ịnyịnya na-eme ka ezinụlọ ya dị ndụ na ahụ.
Chineke zara, si, Emerem. Mgbe okwuru okwu ahụ, 'Mu', enyere m anya ka ịhụ ụwa, mbara ụwa na onwe m, wee ghọta na ọ bụ Ya nwe ihe niile ma kee ya. Echere m na mmadụ niile na-agwa Chineke Nna. Site na mgbe o ruru afọ atọ ruo isii, Onye-nwe kuziri m ihe na okwukwe ma nyekwa m agụmakwụkwọ na-akụzi nke ọma. Ọ gwakwara m, mgbe m dị afọ atọ, na m ga-abụ onye nchụàjà. ” Chineke Nna nyere Michel agụmakwụkwọ zuru oke na nkà mmụta okpukpe ahụ nke na mgbe ọ gara Grand Seminary nke Quebec mgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, o jiri akara A + nwalee na klas ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, Michel mụrụ akparamaagwa na mpaghara nke nkà mmụta okpukpe, dị ka mariology, pneumatology, ihe odide nke Ndị Nna Chọọchị, na-agụsị mahadum na-agụsị akwụkwọ.
Na Christmas Eve, 2009, Fr. Okwa nchụ-aja nke Michel nwere ọnọdụ pụrụ iche. A kpọtere ya n’abalị site na ọnụnọ nke St. Benedict Joseph Labre, onye guzoro n’akụkụ ihe ndina ya, na-ama jijiji n’ubu iji nweta uche. Fr. Akpaliri Michel ma nu olu nke Nna, si, Guzo. So Fr. Michel biliri. “Gaa na kọmpụta.” O we rubere ya isi. “Gee ntị ma dee.” Ọ bụ mgbe ahụ ka Chineke malitere ịtụ iwu obodo maka usoro iwu okpukpe ọhụụ, ngwa ngwa karịa Fr. Michel nwere ike pịnye. Hadsɛ sɛ ɔka Onyankopɔn suro!
Mgbe ahụ, Chineke kwunyere na Fr. Michel banye njem omimi rue ala Diocese nke Emọs, Quebec, ebe O choro ka ewuru ebe obibi ndi monas, ma gosi ya n'uzo zuru ezu banyere uzo ulo ndi a. Chukwu Nna gwara Fr. Michel na ọ ga-abụ onye guzobere ebe obibi ndị mọnk a. Ọ ga-ebido usoro okpukpe ọhụrụ a kpọrọ Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre (Apostolic Fraternity of St. Joseph Benedict Labre) iji kwadebe ndị ụkọchụ maka ọdịnihu nke ụka Katọlik. Fr. Michel buru ụzọ meghachi omume n'ụdị ụjọ, n'ihi na ibu ọrụ ya adịlarị ike, mana ngwa ngwa ghọtara na ịghara ịhapụ Nna ahụ abụghị nhọrọ. Taa, a na-arụ ụlọ nke mbụ n'ime ebe obibi ndị mọnk abụọ, dị ka Chineke siri chọọ.
Chukwu nyere Fr. Michel Rodrigue nwere onyinye ọgụgụ isi na mmụọ pụrụ iche, dịka ịgwọ ọrịa, ịgụ mkpụrụ obi, ncheta foto (nke belatara ọtụtụ ọrịa siri ike na nkụchi obi asatọ!), Amụma, ọnọdụ, na ọhụụ. O nwere obi uto nke obi ya na ochi ya di njikere, ma n'otu oge ahu, ihe di mkpa banyere ihe nile nke Chineke. O meela ihe ngosi, na mgbakwunye na ọrụ ya dị ka prọfesọ seminarị, onye nlekọta ụlọ ọgwụ, onye ụkọchukwu parish, na nso nso a, dịka onye guzobere na Onye isi ndị isi nke òtù okpukpe ọhụrụ na asụsụ Quebec na-asụ French. Fr. Michel Rodrigue na-enweta nkwado zuru oke nke bishọp ya, na mpaghara ya na ọhụụ ya ka enyere ndị nkịtị ya ka ha kwado ya.
Nwanyị nwanyị anyị na-akpọ Fr. Michel Rodrigue “Onye Ozi nke Oge Ọgwụgwụ.” Enyerela ya ihe ọmụma zuru oke ma nyere aka banyere ọdịnihu ụwa anyị ngwa ngwa. Fr. Ya mere, Michel na-ese na nnukwu sava, nke na-ekpughe njikọta ọnụ na mkpa nke amụma dịịrị n'oge anyị, gụnyere ndị dị na Akwụkwọ Nsọ. “Aghọtala m ugbu a! Ugbu a ka m hụrụ! ” Kwuo ndi nuru okwu. Michel na ndị buburu ụzọ gaa n’amaokwu amụma ma pụta na anya.
Fr. Michel bụ nwa na-erube isi na Chọọchị Katọlik. Webụsaịtị ole na ole edepụtawo, na-enweghị ikike ya, okwu banyere ya na site na ya, nke bụchaghị eziokwu. Fr. Dịka ọmụmaatụ, Michel anaghị akwado ma ọ bụ mara nke ozi Maria Divine Mercy, ọ na-akwado nyocha nke Bishop Matthew H. Clark nke John Leary, nke kwupụtara ozi Mr. Leary bụ nke sitere n'aka mmadụ. Lee nkwupụta bịanyere aka na ya ebe a.
Anyị na -akpọ gị oku ka ị gụọ gbasara Fr. Rodrigue, malite na akụkọ ya na ịgbaso ederede na vidiyo n'usoro ka ewepụtara ha. Ịgagharị n'ime ha n'ụzọ ọ bụla nwere ike iwetara gị nghọta na -enweghị isi, ka okwu na ozi ọ bụla sitere n'eluigwe na -ewuli elu na nke ikpeazụ. Dịka ndị nyere aka na webụsaịtị a, anyị na -eche na Fr. Ekwesịrị ịnwale mkpughe Michel dị ka mkpughe ọ bụla nkeonwe, ma gbaa ndị na -agụ akwụkwọ ume ka ha mee ya dịka Catechism of the Catholic Church siri kwuo:
Onye Magisterium nke Guka na-eduzi, sensus fidelium maara etu esi amata ma nabata na mkpughe ndị a, ihe ọ bụla nke bụ ezigbo oku nke Kraist ma ọ bụ ndị nsọ ya na Nzukọ. -Katkizim nke Chọọchị Katọlik, n. Ogbe 67
N'aha Fr. Michel:
Fr. Iwu ọhụrụ nke Michel, Apostolic Fraternity nke St. Benedict Joseph Labre na Quebec bụ onyinye dị mkpa maka ọdịnihu nke Nzukọ-nsọ. N'enyemaka nke Chineke, agba nke abụọ nke maka iwu a ka na-arụ. Ọ bụrụ na vidiyo na-akpali gị ịzụta akwụkwọ ahụ, WARMAKA: Àmà na amụma nke ọkụ nke akọ na uche, site na QueenofPeaceMedia.com, tinye koodu dere, FRATERNITY, na igbe ma obu akwukwo ndenye ọpụpụ, ga-eziga ego ndị ahụ iji kwado Fr. Ebe obibi ọhụrụ mọnk nke Michel na-arụ ọrụ. Anyị na-enyere aka na Countdown to the Kingdom na-akpọkwa gị ka ịnye ego gị ozugbo Fr. Michel maka ọrụ a kachasị mkpa. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka a kpọrọ gị, biko zitere onyinye na adreesị dị n'okpuru. (Fr. Michel agwaghị anyị mee nke a! Ọzọkwa, ọ nweghị ụzọ ọnlaịnụ iji tinye aka).
Biko ziga ndenye ego emere:
Apostolic Fraternity of St. Benedict Joseph Labre
Nna Stefano Gobbi
(Tali (1930-2011) Onye ụkọchukwu, Mystic, na Onye guzobere Marian Movement nke ndị ụkọchukwu
A na-emegharị ihe ndị a, n'otu akụkụ, site n'akwụkwọ ahụ, WARMAKA: Àmà na amụma nke ọkụ nke akọ na uche, p. 252-253:
A mụrụ nna Stefano Gobbi na Dongo, Italy, na ugwu nke Milan na 1930 wee nwụọ na 2011. Dị ka onye isi ọrụ, ọ jisiri ụlọ ọrụ mkpuchi, ma na-esochi ọkpụkpọ oku, ọ gara n'ihu ịnata doctorate na nkà mmụta okpukpe dị nsọ site na Pontifical Lateran University dị na Rome. Na 1964, e chiri ya afọ 34.
N’afọ 1972, afọ asatọ ka ọ bụrụ ụkọchukwu ya, Fr. Gobbi mere njem njem na Fatima, Portugal. Ka ọ na-ekpe ekpere n’ụlọ nsọ nwanyị nke nwanyị maka ụfọdụ ndị ụkọchụpụla ọrụ ha ma na-achọ ịbanye n’otu na-enupụrụ nzukọ Katọlik isi, ọ nụrụ olu Nwanyị nwanyị ahụ na-agba ya ume ka ọ kpọkọtara ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ga-adị njikere ido ihe nsọ. onwe ha na Obi Obi Meri ma buru ndi Pope na Nzuko ejikọ aka na ha. Nke a bụ nke mbụ n'ime ọtụtụ narị n'ime obodo nke Fr. Gobbi ga-anata ihe ọ na-eme.
Na-eduzi ozi ndị a sitere n’elu igwe, Fr. Gobbi guzobere Marian Movement of P alufa (MMP). Ozi nke Nwanyị nwanyị anyị site na July 1973 ruo December 1997, site na mpaghara ruo Fr. Stefano Gobbi, ka edepụtara n’akwụkwọ, Maka ndi ụkọchukwu, Ourmụ Ndi Nwanyị Nwanyị M Hụrụ n'Anya, nke nataworo imprimatur nke kadinal atọ na ọtụtụ ndị bishọp na ndị bishọp gburugburu ụwa. Enwere ike ịchọta ọdịnaya ya ebe a: http://www.heartofmaryarabic.com/wp-content/uploads/2015/04/The-Blue-Book.pdf
Na ntinye nke akwukwo akwukwo de de facto nke MMP: Maka ndi ụkọchukwu, Ourmụ Ndi Nwanyị Nwanyị M Hụrụ n'Anya, ọ na-ekwu banyere ije:
Ọ bụ ọrụ ịhụnanya nke Obi Obi Mary na-etolite na Nzukọ taa iji nyere ụmụ ya aka ibi, na ntụkwasị obi na olile anya, oge ihe mgbu nke ịdị ọcha. N’oge ndị a dị oke egwu, nne nke Chukwu na ndị ụka na-eme ihe n’enweghị oge ọ bụla ma ọ bụ ejighị n’aka iji nyere ndị nchụàjà aka, bụ ndị bụ ụmụ nwoke. N’ezie, ọrụ a na-eji ụfọdụ ngwa ọrụ; ma n'otu ụzọ, a họpụtala Don Stefano Gobbi. N'ihi gịnị? N'otu akụkụ nke akwụkwọ ahụ, e nyere nkọwa ndị a: “Ahọpụtawo m gị n'ihi na ị bụ ntakịrị ngwaọrụ; yabụ onweghị onye ga-asị na nke a bụ ọrụ gị. Marian Movement of the nchụàjà ga-abụrịrị naanị ọrụ m. Site n’adịghị ike gị, aga m egosipụta ike m; site n'ihe efu gị, m ga-egosi ike m ” (ozi nke July 16, 1973). . . Site na mmegharị a, ana m akpọ ụmụ m niile ka ha doo Onwe m nsọ, na igbasa ebe niile ekpere dị.
Fr. Gobbi rụsiri ọrụ ike iji rụzuo ọrụ Nwanyị nwanyị a nyefere ya. Ka ọ na-erule ọnwa Machị 1973, ihe dị ka ndị ụkọchukwu 1985 abanyela na Marian Movement of P nchụàjà, na ngwụcha 350, Fr. Gobbi abanyela n'ụgbọ elu ụgbọ elu 400 ma buru ọtụtụ njem n'ụgbọala na ụgbọ oloko, na-eleta kọntinent ise ọtụtụ oge. Taa mmeghari kpughere ndị otu narị kadinal Katọlik na ndị bishọp, ihe karịrị 100,000 ndị ụkọchukwu Katọlik XNUMX, na nde ndị Katọlik zuru ụwa ọnụ, na-enwe mgbachi ekpere na ikekọrịta ụkọ n'etiti ndị ụkọchukwu ma kwesịrị ntụkwasị obi n'akụkụ ụwa niile.
Na Nọvemba nke 1993, MMP dị na United States, nke hiwere isi na St Francis, Maine, natara ngọngọ papal gọọmentị site n'aka Pope John Paul II, onye nọgidere na-enwe mmekọrịta chiri anya na Fr. Gobbi wee soro ya mee Mas ọnụ n'ụlọ ụka Vatican na nzuzo kwa afọ maka afọ.
Ozi nke Nwanyị nwanyị anyị nyere Fr. Gobbi site na mpaghara ime ime bụ ụfọdụ n'ime ọtụtụ na nkọwa gbasara ịhụnanya o nwere n'ebe ndị ya nọ, nkwado ndị ụkọchukwu ya na -abịa mgbe niile, mkpagbu na -abịanụ nke Ụka, na ihe ọ kpọrọ "Pentikọst nke Abụọ," okwu ọzọ maka ịdọ aka na ntị, ma ọ bụ Ìhè nke Akọnuche nke mkpụrụ obi niile. N'ime Pentikọst nke abụọ a, Mmụọ Kraịst ga-abanye n'ime mkpụrụ obi mgbe niile n'ike na nke ọma na n'ime nkeji ise ruo ise na ise, onye ọ bụla ga-ahụ ndụ mmehie ya. Ozi ndị Marian nye Nna Gobbi yiri ka ọ na -adọ aka na ntị na ihe omume a (ma emesịa ọrụ ebube e kwere na nkwa nakwa ịta ahụhụ ma ọ bụ ntaramahụhụ) ga -eme na njedebe nke narị afọ nke iri abụọ. [Ozi #389] Ozi Nwanyị Nwanyị anyị nwere ọganiihu kwukwara na ụfọdụ n'ime ihe ndị a ga -eme na "narị afọ nke iri abụọ." Yabụ kedu ihe na -akọwa ọdịiche a na usoro iheomume nke ụwa?
“Ana m agbatị oge ebere maka oge ndị mmehie. Ma ahụhụ ga-adịrị ha ma ọ bụrụ na ha amataghị n’oge nleta m. ” (Akwụkwọ edemede nke St. Faustina, # 1160)
N’ozi nneoma di aso nke Fr. Gobbi, o kwuru,
"Ọtụtụ oge ka m tinyere aka ka m nwee ike ịlaghachi azụ na n'ihu na mmalite nke nnukwu nnwale, maka ịdị ọcha nke mmadụ a dara ogbenye, nke mmụọ ọjọọ na -achị ugbu a." (#553)
Ọzọkwa na Fr. Gobbi o kpughere:
"…. (# 576).
Ma ugbu a, ọ dị ka Chineke anaghị egbu oge. Ihe omume nke nne di ngozi buru n’iru Fr. Stefano Gobbi amalitela ugbu a.
Note: N’ihe dị ka afọ iri abụọ na atọ gara aga, otu nwoke na otu nwanyị na Kalịfọnịa, ndị ebikọrịrị na ndụ mmehie, malitere ntụgharị miri emi site na Ebere nke Chineke. Ndi nwunye kpaliri ime ụlọ ka o bido ịmalite Chapleti otu ha mechara ahụ Chukwu. Ka ọnwa asaa gachara, ihe a kpụrụ akpụ nke nne anyị nwanyị nke Obi adịghị ọcha n’ụlọ ha bidoro ịkwa mmanụ nke ukwuu (ka emesịrị, ihe oyiyi ndị ọzọ dị nsọ na ihe oyiyi malitere mmanụ na-esi ísì ụtọ mgbe a na-egwu obe na akpụrụ akpụ nke St. Pio. kwụ ọtọ na Marian Center dị na Divine Mercy Shrine na Massachusetts). Nke a mere ka ha chegharịa n'ọnọdụ obibi ha ma banye n'alụmdi na nwunye dị nsọ. Mgbe ihe dị ka afọ isii gachara, nwoke ahụ malitere anya na -anụ olu Jizọs (ihe a na -akpọ "mkpọchi"). O nweghi catechesis ma ọ bụ nghọta nke Okwukwe Katọlik, yabụ olu Jizọs mere ka ụjọ jide ya. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime okwu Onyenwe anyị bụ ịdọ aka na ntị, ọ kọwara olu Jizọs dị mma mgbe niile. Ọ natakwara nleta site na St. Pio na mpaghara sitere na St. Thérèse de Lisieux, St. Catherine nke Siena, St. Michael Onye isi Ndị Mmụọ Ozi na ọtụtụ ndị nwanyị anyị mgbe ọ nọ n'ihu Sakrament Ngọzi. Mgbe o kesasịrị ozi afọ abụọ na ihe nzuzo (naanị nwoke a maara na ikwupụta ya n'oge ọdịnihu nke naanị Onyenwe anyị maara) mpaghara ndị ahụ kwụsịrị. Jizọs gwara nwoke ahụ, Agaghị m agwa gị okwu ugbu a, ma mama m ga na-edu gị.”Di na nwunye a chere na a kpọrọ ha ka ha bido ileba anya na Marian Movement of Pada ebe ha ga -atụgharị uche na ozi Nwanyị nwanyị zigara Fr. Stefano Gobbi. Ọ bụ afọ abụọ n'ime oghere ndị a ka okwu Jizọs mezuru: Nwanyị nwanyị anyị malitere iduzi ya, mana n'ụzọ kacha dị ịtụnanya. N'oge oghere, na oge ndị ọzọ, nwoke a ga-ahụ "n'ikuku" n'ihu ya ọnụọgụ ozi sitere na nke a kpọrọ "Akwụkwọ na-acha anụnụ anụnụ, ” Nchikota mkpughe nke nne anyi ndi nwanyi nyere Fr. Stefano Gobbi, “Nye Ndị Pkọchukwu'smụ Ladymụnna Anyị Hụrụ n'Anya.” Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na nwoke a mere ọ bụghị gụọ ihe Akwụkwọ Blue rue taa (dika mmuta ya nwere oke akwukwo ma nwee nsogbu igu akwukwo). N'afọ ndị a, ọnụọgụgụ / nọmba ndị ahụ ga-anwale ga-egosi na oge a na-apụghị ịgụta ọnụ nke mkparịta ụka mkparịta ụka na ngọngọ ha, ma ugbu a taa, ihe ndị na-eme gburugburu ụwa. Fr. Ozi Gobbi kụrụ ada mana ọ na-achọta mmezu ha ugbua.
Mgbe ọ bụla ọnụọgụ ndị a ruru Countdown na Kingdom, anyị ga-eme ka ha dị ebe a.
Maka onyinye nsọ Marian dị ike, nye akwụkwọ a iwu, Nkwuputa nke Mantle Mary: Nkwụghachi nke mmụọ maka Enyemaka nke Eluigwe, Archbishop Salvatore Cordileone na Bishop Myron J. Cotta kwadoro ya, na ndị so ya Mantle Mary Ndozi Akwukwo Ekpere. Lee www.MarysMantleConsecration.com.
Colin B. Donovan, STL, “Marian Movement of O nchụàjà,” EWTN ọkachamara na-aza EWTN, wee banye na July 4, 2019, https://www.ewtn.com/expert/answers/MMP.htm
Lee n’elu na www.MarysMantleConsecration.com.
Isi ụlọ ọrụ nke Marian Movement of P alufa na United States America, Nwanyị anyị gwara ndị ụkọchukwu ya m hụrụ n'anya, 10th Mbipụta (Maine; 1988) p. xiv.
Ibid. peeji nke. xii.
Mpempe akwụkwọ dị na Trevignano Romano, Italy
Ebubo ebubo nke Marian eboro na Trevignano Romano na Italy rue Gisella Cardia bu ihe ohuru. Ha bidoro na 2016 soro nleta ya na Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, ma zụta ihe osise nke Nwanyị nwanyị anyị, nke mechara malite ịkwa ákwá ọbara. Akara ahụ abụrụla okwu mgbasa ozi mba nke Italiantali nke oge ọhụụ ahụ kpesara ezigbo udo n'agbanyeghị nkatọ kpụ ọkụ n'ọnụ sitere na ndị na-ahụ maka ihe nkiri na Studio na ya na akwụkwọ abụọ. A Nihil mgbochi bụ ihe Archbishop nyere n'oge na-adịbeghị anya maka nsụgharị Polish nke abụọ n'ime ndị a, Na Cammino con Maria (“Na Meri na -aga n'ụzọ”) bipụtara Edizioni Segno, nke nwere akụkọ banyere ngwa na ozi metụtara ya ruo na 2018. Ọ bụ ndị mba ọzọ Nihil mgbochi ọ bụghị mebere iwu nke aka ya na ọnọdụ nkwado diocesan nke ọbịbịa, ọ bụghị ihe pere mpe. Na bishọp obodo Civita Castellana dị ka ọ nọ na -akwado Gisella Cardia nwayọ, na -enye ohere ịbanye n'isi ụlọ ụka maka nnukwu ndị ọbịa na -enubata na -amalite ịgbakọta n'ụlọ Cardia ikpe ekpere, ozugbo akụkọ banyere ọdịdị malitere ịgbasa.
Enwere ọtụtụ isi ihe mere anyị ga -eji lekwasị anya na Trevignano Romano dị ka isi amụma nwere ike ịdị mkpa ma sie ike. Nke mbu, ọdịnaya nke ozi Gisella na -ejikọ ọnụ nke ọma na '' nkwekọrịta amụma '' nke isi mmalite ndị ọzọ nọchiri anya ya, na -enweghị ihe ngosi ọ bụla maka ịmara ịdị adị ha (Luz de Maria de Bonilla, Pedro Regis, Fr. Michel Rodrigue, Fr. Adam Skwarczynski , Akwụkwọ ọgụgụ Bruno Cornacchiola...).
Nke abuo, otutu otutu ozi amuma riri nne ga-egosi na o mezuru: n’etu anyi choputara aririo na Septemba 2019 ikpe ekpere maka China dika isi iyi nke oria ohuru. . .
Nke ato, ozi niile ejirila ihe ndi a na-ahu anya mee, ihe akaebe foto nke achọtara Na Cammino con Maria, nke na abughi nkpuru nke ncheputa nke uche, kari ihu ọnụnọ nke ozu Giselle na ọdịdị nke obe na ihe odide okpukpe na ọbara n'aka Gisella. Lee foto e sere na webụsaịtị ọpụtara https://www.lareginadelrosario.com/, nke na -ekwu akaebe Siate (“bụrụ ndị akaebe”), Abbiate fede (“nwee okwukwe”), Maria santissima (“Mary nke kachasị nsọ”), Popolo mio (“Ndị m), na Amore (“ Ịhụnanya ”).
N'ezie, ihe ndị a nwere ike bụrụ aghụghọ ma ọ bụ ọbụna ndabichi ndị mmụọ ọjọọ, dị ka ịkwa ákwá nke akpụrụ akpụ nke nwa agbọghọ na -ese onyinyo Jizọs n'ime Gisella na di ya, Gianni, n'ụlọ. Echiche nke na ndị mmụọ ozi dara ada nwere ike ịbụ na mbido ozi ndị ahụ, o yighị ka ọ bụ ihe na -agaghị ekwe omume, n'ihi ọdịnaya nke mmụọ na agbamume ha maka ịdị nsọ. Nyere ihe ọmụma anyị site na ịgba ama nke ndị na -apụnara mmadụ ihe gbasara etu ndị mmụọ ozi dara ada si na -asọ oyi ma na -atụ egwu Meri ruo n'ókè ịjụ ịkpọ ya, ohere mmadụ nwere ike jiri aka ya mee ka ewepụta okwu ndị a "Meri kachasị nsọ" ("Maria Santissima") n'ime ọbara n'ahụ onye ọhụ ga -adị ka ọ dị n'akụkụ nil.
Ọbụlagodi, Gisella stigmata, onyonyo ọbara ya “hemographic”, ma ọ bụ ihe oyiyi na -agba ọbara ekwesịghị, dị ka nke na -egosi ịdị nsọ nke onye ọhụụ dịka inye ya. map blanche gbasara ọrụ niile ọ ga - eme.
Agbanyeghi ihe ngosi vidiyo ozo banyere ihe anwu n’elu igwe n’iru otutu ndi aka mgbe a na-ekpe ekpere n’ebe a na-eme ngwaa, yiri ihe “Dangba egwu Sun” na Fatima n’afọ 1917 ma ọ bụ Poopu Pius XII gbara aka na Ogige Vatican gbara tupu mkpọsa ahụ. nke Dogma nke Assumption na 1950. Ihe ịtụnanya ndị a, mgbe anyanwụ chagharịrị, gbaa ma ọ bụ gbanwee ka ọ bụrụ Onye Nlekọta Eucharistic, n'ụzọ doro anya enweghị ike ịmebi mmadụ, ma tinye ya (ọ bụ ezie ezughị oke) na igwefoto, enwekwara ike ọ bụghị naanị mkpụrụ nke mkpokọta inye. pịa ebe a ịhụ vidiyo nke ọrụ ebube nke anyanwụ (Trevignano Romano - 17 Settembre 2019 - Miracolo del sole/“Trevignano Romano - Septemba 17, 2019 - Ọrụ Ebube nke anyanwụ.”) pịa ebe a ịhụ Gisella, di ya, Gianni, na onye ụkọchukwu, na-ahụ ọrụ ebube nke anyanwụ na nnọkọ ọha na eze nke otu akụkọ Gisella nke nwanyị amaghị nwanyị. (Trevignano Romano miracolo del naanị 3 gennaio 2020 / “Ọrụ ebube nke anyanwụ anyanwụ, Jenụwarị 3, 2020”)
Fammara akụkọ ntolite nke Marian na-enye echiche na a ga-ele ọrụ ebube ndị a anya dị ka ihe na-egosi izi ezi nke nkwukọrịta eluigwe.
Jennifer bụ nne onye America na-eto eto na nwunye ụlọ (aha ikpeazụ ya adịghị arịrịọ nke onye nduzi ime mmụọ ya iji kwanyere nzuzo nke di ya na ezinụlọ ya.) Ọ bụ, ikekwe, ihe mmadụ gaara akpọ nke Katọlik "na-ahụkarị" emi m knewkọfiọkke n̄kpọ ndomokiet iban̄a mbuọtidem esie ye se Bible ekpepde. Enye ama ekere ke ini kiet ete ke “Sodom ye Gomorrah” ẹdi owo iba ye nte ke “Mme Ataikọ” edi enyịn̄ otu akwa itiat. Mgbe ahụ, n'oge Oriri Nsọ na Mass otu ụbọchị, Jizọs bidoro ịgwa ya okwu na-egosi ịhụnanya na ịdọ aka na ntị na-agwa ya,Nwa m, ị bụ ịgbatị na ozi M nke ebere Chukwu. ” Ebe ọ bụ na ozi ya lekwasịrị anya na ikpe ziri ezi nke ahụ ga Abia na ụwa nke na-enweghị nchegharị, ha na-emejupụta akụkụ nke ikpeazụ nke ozi St. Faustina:
… Tupu m abịa dịka Onye-ikpe ziri ezi, ebu ụzọ meghe ọnụ ụzọ nke ebere m. Onye jụrụ igabiga ọnụ ụzọ nke ebere m ga-agafe n'ọnụ ụzọ ikpe m…-Ebere Chukwu Na Obi M, Akwụkwọ akụkọ nke St. Faustina, n. 1146
Otu ụbọchị, Onye-nwe gwara ya ka ọ chee n’aka Nna dị nsọ, Pope John Paul nke Abụọ ozi ya. Fr. Seraphim Michalenko, onye na-esote onye na-ekwuchitere akwụkwọ ọrụ nke St. Faustina, sụgharịrị ozi Jennifer n'asụsụ Polish. Ọ nyere tiketi na Rome, n'agbanyeghị nsogbu niile, hụtara onwe ya na ndị ibe ya n'okporo ụzọ dị na Vatican. O zutere Monsignor Pawel Ptasznik, ezigbo enyi na onye na-arụkọ ọrụ ọnụ na Pope na Ọfịs Ọfịs nke State maka Vatican. E zigara ndị Kadinal Stanislaw Dziwisz, odeakwụkwọ nke John Paul II. Na nnọkọ na-esochi, Msgr. Pawel kwuru, “Gbasara ụwa ozi ị nwere ike.”
Edere ihe ndị a na akwụkwọ ndị kachasị ere, WARMAKA: Àmà na amụma nke ọkụ nke akọ na uche.
Luz de María de Bonilla bụ onye omimi Katọlik, onye isi ala, nwunye, nne, Augustinian nke atọ, na onye amụma sitere na Costa Rica, nke bi ugbu a na Argentina. O toro n’ụlọ ebe okpukpere chi nke ukwuu ma nwee nnukwu nsọpụrụ na Oriri Nsọ, ebe ọ bụ nwata, ọ nwere nleta nke igwe site n’aka mmụọ nlekọta ya na nne nke gọziri agọzi, onye ọ lere anya dị ka ndị ibe ya na ndị tụkwasara obi ya. Na 1990, ọ nwetara ọgwụgwọ n'ụzọ ọrụ ebube site n'ọrịa, jikọtara ya na nleta abụọ sitere na nne ahụ a gọziri agọzi na ọkpụkpọ ọhụụ na ndị ọzọ na-aga n'ihu ọha na-ekerịta ahụmịhe omimi ya. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-adaba n'oké obi ụtọ ọ bụghị naanị na ezinụlọ ya - di ya na ụmụ ya asatọ, kamakwa ndị nọ ya nso bụ ndị malitere ịgbakọta ikpe ekpere; ha onwe ha wee guzobe mkpuchi ekpere, nke na-eso ya ruo taa.
Mgbe ọtụtụ afọ hapụrụ onwe ya nye uche Chineke, Luz de María malitere ịta ahụhụ ihe mgbu nke Cross, nke ọ na-eburu n’ahụ na mkpụrụ obi ya. Nke mbu mere, ya kerịta, na Fraịdee: “Onye nwe anyi jụrụ m ma m chọrọ isonye na ahụhụ Ya. Azara m ya na mgbe ahụ, mgbe otu ụbọchị nke ekpere na-aga n'ihu, n’abalị ụbọchị ahụ, Kristi pụtara n’ihu m n’elu obe kerịta ọnya ya. Ọ bụ ihe mgbu a na-enweghị ike ịkọwa, ọ bụ ezie na m maara na ọ nwere ike na-egbu mgbu, ọ bụghị ngụgụ nke ihe mgbu Christ na-ata ahụhụ maka mmadụ. ” ((“Revelamos Quen Es la Vidente Luz de María,” Foros de la Virgen María, batara na July 13, 2019, https://forosdelavirgen.org/118869/luz-de-maria-reportaje))
Ọ bụ na Machị 19 nke 1992, ka nne a gọziri agọzi malitere ịgwa Luz de María okwu mgbe niile. Kemgbe ahụ, ọ natala ozi ugboro abụọ kwa izu na oge ụfọdụ, naanị otu. Ozi ndị ahụ bịara dị ka mpaghara mmiri, sochiri ọhụụ Meri, onye bịara ịkọwa ozi Luz de María. “Ahụtụbeghị m ịma mma dị ukwuu otú a,” Luz kwuru banyere ọdịdị Meri. “Ọ bụ ihe ị na-agaghị emeli. Oge nke ọ bụla dị ka nke mbụ. ”
Ka ọnwa ole na ole gachara, Meri na Saint Michael Onye isi mmụọ ozi mere ka ọ mata Onye-nwe-anyị n’ọhụụ, mgbe oge na-aga, Jizọs na Meri ga-agwa ya ihe ndị ga-abịa, dịka ingdọ-aka na ntị. Ozi ndị a wee bụrụ na ịhapụrụ ọha na eze, ma site n'iwu nke Chineke, ọ ghaghị ịkọwa ụwa.
Ọtụtụ amụma Amụma Luz de María emezuola, gụnyere mwakpo Twin Towers na New York, nke a mara ọkwa nye ya ụbọchị asatọ tupu ya emee. N'ime ozi ndị ahụ, Jizọs na Meri kwupụtara nnukwu mwute ha nwere maka nnupụisi nke mmadụ na iwu Chineke, nke mere ka ọ kwado mmebi iwu wee mee ihe megide Chineke. Ha dọrọ ụwa aka na ntị maka mkpagbu na-abịanụ: kọmunist na ọnụ ọgụgụ ya na-abịanụ; agha na ojiji nke ngwa agha nuklia; unyi, ụnwụ, na ọrịa; mgbanwe, ọgba aghara mmekọrịta ọha na eze, na omume rụrụ arụ; mkpọsa nke ụka; ọdịda nke akụ na ụba ụwa; ngosipụta nke ọha na eze na ụwa nke onye na-emegide Kraịst; mmezu nke ịdọ aka na ntị, ọrụ ebube, na ịta ahụhụ ahụ; ọdịda nke asteroid, na mgbanwe nke ọdịdị ala, n'etiti ozi ndị ọzọ. Ihe a niile abụghị ịtụ ụjọ, kama ịgba mmadụ ume ka ọ tụgharịa legide Chineke anya. Ọ bụghị ozi niile nke Chineke bụ ọdachi. E nwekwara nkwupụta banyere nlọghachi nke ezi okwukwe, ịdị n'otu nke ndị nke Chukwu, mmeri nke Obi Obi Meri, na mmeri ikpeazụ nke Kraịst, Eze nke Eluigwe na Ala, mgbe enweghị nkewa na-agaghị adị, na Anyị ga-abụ otu ndị mmadụ n’okpuru Otu Chineke.
Nna José María Fernandez Rojas nọgidere n'akụkụ Luz de María dịka onye nkwuputa ya site na mmalite nke ọhụụ ya na ọhụụ ya, ndị ụkọchukwu abụọ so ya na-arụ ọrụ na-adịgide adịgide. Ozi ọ na-anata bụ mmadụ abụọ dere ya ma onye nọn sụgharịa ya. Otu ụkọchukwu na-eme mgbazi edepụtara, mgbe ahụ onye ọzọ na-enye ozi ndị ahụ nyocha ikpeazụ tupu ha ebugo ha na weebụsaịtị, www.revelacionesmarianas.com, ka ekesaa ya na ụwa. Achịkọta ozi ndị a n'ime akwụkwọ nwere, Ala-eze Gi Abia, na Machị 19, 2017, Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, Bishọp Titular nke Estelí, Nicaragua nyere ha imprimatur of the Church. Akwụkwọ ozi ya malitere:
Estelí, Nicaragua, Afọ nke Onyenwe anyị, Machị 19 nke 2017
Onye otu Onye-isi Nduzi Saint Joseph
Enyerela mpịakọta nke nwere “MGBAGP PRTA NIILE” sitere n’eluigwe, nke enyere Luz de María afọ 2009 rue ugbu a, ka enyegoro m inye m nkwado nke ụka. Enyochawo m na okwukwe na mmasị na mpịakọta ndị a akpọrọ, NIILE KWES COMR COM B ,R,, abịawo m n’agha na ha bụ òkù a kpọrọ mmadụ ịlaghachi n’ụzọ nke na-eduga ná ndụ ebighi ebi, nakwa na ozi ndị a bụ agbamume sitere n’eluigwe n’oge ndị a. nke mmadụ ga-akpachara anya ka ọ ghara isi n'okwu Chineke pụta.
Na mkpughe nke ọ bụla enyere Luz de María, Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na Nwa agbọghọ ahụ na-agọ ọhụụ nwanyị na-eduzi nzọụkwụ, ọrụ, na omume nke ndị nke Chineke n'oge ndị a dị mmadụ mkpa ịlaghachi na nkuzi dị na Akwụkwọ Nsọ.
Ozi dị na mpịakọta ndị a bụ ihe gbasara mmụọ, amamihe Chineke, na omume maka ndị ji okwukwe na ịdị nwayọ nabata ha, yabụ ana m akwado gị ka ị gụọ, tụgharịa uche ma tinye n'ọrụ.
ATA m na ahụghị m njehie ọ bụla nke na-anwa imegide okwukwe, ịkpa ezi agwa na ịkpa ezi agwa, nke m na-enye akwụkwọ ndị a IMPRIMATUR. Na ngozi m, a na m ekwupụta ezigbo obi m maka “Okwu nke Eluigwe” dị na ebe a ịtụgharị uche n'ihe niile dị mma chọrọ. A na m arịọ, Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, Nne nke Chukwu na Nne Anyị, ịrịọchitere anyị arịrịọ ka uche Chineke wee mezuo
“. . . nelu uwa dika esi di n’eluigwe (Mt 6:10).
Onye isi Bishop nke Estelí, Nicaragua
N'okpuru bụ ngosipụta nke Luz de María nyere na Katidral Esteril na Nicaragua, mmeghe nke Bishọp Juan Abelardo Mata nyere ya imprimatur:
Pịa ebe a ka lee vidiyo.
N’ezie, nkwekọrịta mba ụwa yiri ka ọ pụtawo na ozi Luz de Maria de Bonilla kwesịrị ịtụle. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a, enwere ike ichikota dịka ndị a:
• Na Nlekọ nke Chọọchị Katọlik, nke Bishọp Juan Abelardo Mata Guevara nke Esteril nyere na 2017 n'akwụkwọ Luz de Maria mgbe 2009 gachara, yana nkwupụta nke na -egosi nkwenye ya na mbido ike ha.
• Ọdịnaya mmụta na ozi nke ozi ndị a na ntinye, na-agụkwa ugwu.
• Eziokwu ahụ na ọtụtụ ihe omume buru amụma na ozi ndị a (mgbawa ugwu na mpaghara ụfọdụ akọwapụtara, mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na mpaghara ụfọdụ, dịka Paris) emezuworịị na oke ziri ezi.
• Njikọ dị nso na nke zuru ezu, na-enweghị njigide mmadụ, na ozi sitere na isi mmalite ndị ọzọ siri ike nke Luz de Maria na-amaghị na ya onwe ya (dịka Fr. Michel Rodrigue na ndị ọhụụ ahụ na Heede, Germany n'oge oge nke atọ. Reich).
• Thedị adị nke ihe omimi dị omimi na-aga n'ihu na-eso Luz de Maria (nnwere onwe ya, ọ na-agba ọbara n'ihu ya, ihe oyiyi okpukpe nke na-ebuli mmanụ). Oge ụfọdụ ndị a nọ n'ihu ndị akaebe nke anyị nwere ihe akaebe vidiyo (-ahụ ebe a).
Iji gụkwuo banyere Luz de Maria de Bonilla, lee akwụkwọ ahụ, WARMAKA: Àmà na amụma nke ọkụ nke akọ na uche.
N’afọ 1992, Marco Ferrari malitere iso ndị enyi ya na-ezukọ iji kpee ekpere ndị Rosary na mgbede Satọdee. Na Machị 26, 1994, ọ nụrụ otu olu na-asị "Nwata, dee!" "Marco, nwa m nwoke, atụla egwu, abụ m mama gị, dee maka ụmụnne gị nwoke na ụmụnne gị nwanyị". Mpepe nlele nke “Nne nke Lovehụnanya” dị ka nwata nwanyị dị afọ 15-16, mere na July 1994; N'afọ sochirinụ, e nyefere Marco ozi nkeonwe maka Pope John Paul nke Abụọ na Bishọp nke Brescia, o bufere. Ọ natakwara ihe nzuzo iri na otu gbasara ụwa, Italytali, akụkọ ụwa, nlọghachi nke Jizọs, Churchka na Isi nke Atọ nke Fatima.
Site na 1995 ruo 2005, Marco nwere ihere pụtara n'oge Lent ma gbakere ọhụụ nke Onye-nwe-ya na Fraịdee Good. Ọtụtụ ihe egwu ndị ọzọ na-akọwaghị na sayensị ka achọpụtagoro na Paratico, gụnyere oke nke onyonyo nke “Nne nke inhụnanya” n'ihu ndị akaebe 18 na 1999, yana ọrụ ebube abụọ dị na 2005 na 2007, nke abụọ na-ewere ọnọdụ na ugwu ugwu nwere ihe karịrị 100 mmadụ nọ na ya. Mgbe bishọp nke Brescia Bruno Foresti guzobere kọmishọna nyocha na 1998, Churchka ahụ ewereghị ọkwa dị elu na ngwa ihe a, agbanyeghị na ndị otu ekpere Marco ekwela ka ha zukọọ na ụlọ ụka dị na diocese.
Marco Ferrari nwere Pope atọ na Pope John Paul nke Abụọ, ise nwere Benedict XVI na atọ nwere Pope Francis; site na nkwado nke Churchka, gọọmentị Paratico ehiwela njikọ zuru ụwa ọnụ nke "Oases nke nne Lovehụnanya" (ụlọ ọgwụ ụmụaka, ụmụ mgbei, ụlọ akwụkwọ, enyemaka maka ndị ekpenta, ndị mkpọrọ, ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ…). Ihe nrịba ama ha ka Pope Francis gọziri n'oge na-adịbeghị anya.
Marco gara n'ihu na-anata ozi na Sọnde nke anọ nke ọnwa ọ bụla, ọdịnaya nke jikọtara ya na ọtụtụ amụma ndị ọzọ dị ịtụnanya.
Ozi ndi ozo: http://mammadellamore.it/inglese.htm
N'ịgbaso Turzovka (1958-1962) na Litmanova (1990-1995), obodo Dechtice bụ ebe ngosipụta ọgbara ọhụrụ nke atọ na Slovakia, ebe ihe omume sayensị akọwapụtaghị malitere na Disemba 4, 1994. Ka ha na-alọta Sunday Mass, ụmụaka anọ nọ. na -ekwu maka ịga kpee ekpere site na obe obodo dị na Dobra Voda mgbe otu n'ime ha hụrụ ka anyanwụ na -atụgharị wee gbanwee agba. N'ịchọpụta na nke a nwere ike ịbụ akara, ụmụaka ahụ malitere ikpe Rosary. Martin Gavenda - onye ga -abụ onye na -ahụkarị ihe pụtara - hụrụ ọkụ na -acha ọcha na nwanyị nke kwuru na ọ chọrọ iji ya mee atụmatụ Chineke. N'ọbịbịa nwanyị ahụ ọzọ, ụmụaka ndị ahụ ji mmiri a gọziri agọzi wụsa ihe omimi ahụ, na -eche na ọ nwere ike ịbụ mmụọ ọjọọ, mana nwanyị ahụ apụghị n'anya. Ọdịdị ahụ gara n'ihu na Dobra Voda, mgbe ahụ na Dechtice, ebe ụmụaka ndị ọzọ malitekwara ịnata ozi. N'August 15, 1995, nwanyị ahụ kpọrọ onwe ya Mary, Queen of Help.
Isiokwu ndị bụ isi nke ozi sitere na Dechtice, nke na -aga n'ihu ruo taa, bụ otu ihe ahụ ndị anabatara na saịtị ngosipụta ndị ọzọ a pụrụ ịtụkwasị obi n'ime iri afọ ndị na -adịbeghị anya. Ha na -egosipụta mbọ Setan na -agba ibibi Ụka na ụwa niile yana ọgwụgwọ nke Eluigwe nyere: sakramenti, Rosary, ibu ọnụ na nkwụghachi maka mmejọ e mere megide obi Jizọs na Meri, ebe mgbaba na “igbe” maka ndị kwesịrị ntụkwasị obi nọ na nsogbu anyị. ugboro.
Mmụaka ahụ bụ ndị Mgr Dominik Toth nke archdiocese Trnava-Bratislava nabatara ma gọzie ha, bụ ebe ebidoro nyocha gọọmentị na October 28, 1998. Onwebeghị nkwupụta ekwu maka izi ezi nke ngosipụta ahụ, nke ,ka na-aga n'ihu na-enyocha .
Medjugorje bụ otu n'ime saịtị ngosipụta “na -arụ ọrụ” nke a kacha eleta. N'ọnwa Mee afọ 2017, kọmiti nke Pope Benedict XVI guzobere nke Kadịnal Camillo Ruini nọ n'isi ya mechiri nyocha ya na mpụta. Ọrụ ahụ karịrị akarị tozuru oke nke ịmata ọdịdị karịrị nke ọdịdị asaa nke mbụ. N'ọnwa Disemba nke afọ ahụ, Pope Frances wepụrụ mmachibido njem njem diocesan, nke kachasị bulie Medjugorje n'ọkwa ofufe. Pope họpụtara onye nnọchi anya Vatican ka ọ bụrụ onye nlekọta nlekọta ndị njem ebe ahụ, na -ekwupụta na July 2018 na obere obodo a bụ "isi iyi amara maka ụwa niile." Na mkparịta ụka onwe onye ya na Bishọp Pavel Hnilica, Pope John Paul II kwuru, "Medjugorje bụ n'ihu, mgbatị Fatima." Ka ọ dị ugbu a, ngosipụta ya na amara ndị na -eso ya ewepụtala ihe karịrị narị ọrịa anọ edepụtara edepụtara, ọtụtụ narị ọrụ ịkpọ oku, ọtụtụ puku ministri n'ụwa niile, na ntụgharị na -enweghị atụ na nke na -adịkarị egwu.
Maka nkọwa gbasara akụkọ gbasara nghọta nke Churchka banyere Medjugorje, gụọ MedjugorjeIhe May Na-agaghị Amata. Mark Mallett enyewokwa azịza nye mkpesa 24 na ngosipụta ahụ. Gụọ Medjugorje……Ụ Sịga Genweghị.
Maka ịgụ mkparịta ụka nke mgbanwe dị ịtụnanya na ntanetị nke medjugorje na ịgụta ndekọ nke ngwa mbụ, lee ndị na-ere ahịa kachasị mma, NKPURU NIILE: Ebube di ebube banyere oria na ntughari site na arịrịọ nke Meri na NKE MENA NA MARY: Menmụ nwoke isii meriri n'agha kachasị nke ndụ ha.
Nwa Anya nke Nwanyi Anguera
Site n'ozi 4921ro nke Pedro Regis natara site na 1987, otu ihe metụtara ihe atụpudoro ederede nke Nwanyị nwanyị nke Anguera na Brazil bụ nnukwu ihe. Ọ dọtara uche ndị edemede ọkachamara dịka onye ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama nke mba Saverio Gaeta, ma bụrụkwa onye na-eme nchọpụta Annarita Magri ogologo akwụkwọ a.
Na nlele mbụ, ozi ndị ahụ nwere ike ịdị ka ihe a na -eme ugboro ugboro (ebubo a na -ebokarị ndị nọ na Medjugorje) n'ihe banyere nkwusi ike ha na isi okwu ụfọdụ: mkpa ọ dị itinye ndụ mmadụ kpam kpam nye Chineke, ikwesị ntụkwasị obi nye Ezigbo Magisterium nke Ụka, mkpa ekpere, Akwụkwọ Nsọ na Oriri Nsọ. Agbanyeghị, mgbe a tụlere ya ogologo oge, ozi Anguera na -emetụta ọtụtụ isiokwu na -enweghị ihe ọ bụla na -adabaghị na nkuzi Ụka ma ọ bụ mkpughe nkeonwe akwadoro.
N'ụzọ kwere nghọta, ọnọdụ Chọọchị a ga-atụ egwu Anguera bụ otu ịdọ aka na ntị; dịka ọ dị na Zaro di Ischia, e guzobela komputa maka ebumnuche nyocha. Agbanyeghị, ekwesịrị ikwu na ọnọdụ nke Msgr. Zanoni, Archbishop ugbu a nke Feira de Santana, ya na diocesan dịịrị ọrụ maka Anguera, na-akwado nkwado nke ukwuu, dịka enwere ike ịhụ site na mkparịta ụka dị mkpirikpi a (n'asụsụ Portuguese na mpaghara titlestali): pịa ebe a
Archbishop Zanoni apụtala n'ihu ọha na Anguera n'akụkụ Pedro Regis, ma gọzie ndị njem ala nsọ.
Ọ kwesịrị ịpụta nke ọma na ọdịnaya nke ozi ndị a enweghị ike ị nweta mmụọ ọjọọ n'ihi oke nkwenkwe okpukpe ha. Ọ bụ eziokwu na Dominican François-Marie Dermine bụ onye Canada ama ama boro Pedro Regis na ụlọ mgbasa ozi Katọlik nke Ịtali ịnata ozi site na "ide akpaka". Onye ọhụ ụzọ ahụ, n'onwe ya, agbaghawo echiche a ozugbo na n'ụzọ doro anya (pịa ebe a). Ka ilele Pedro na -ekesa Ozi ndị enwetara, pịa ebe a.
Na nyocha nke nso nke uche Fr. Na-anabataghị ajụjụ niile nke mkpughe nke oge a, ọ pụtara ìhè ngwa ngwa na o nwere mmụta mmụta okpukpe a priori megide amụma ọ bụla (dịka ihe odide Fr. Stefano Gobbi) wee were ọbịbịa nke Oge Udo dị ka echiche jụrụ okwukwe. Maka ohere enwere na Pedro Regis nwere ike chepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozi 5000 n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 33, a ga -ajụrịrị ya ihe nwere ike ịkwali ya ime nke a. Karịsịa, kedu ka Pedro Regis siri chee n'echiche ozi buru ibu #458, nke ọ natara n'ihu ọha ka ọ na -egbu ikpere ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa abụọ na Nọvemba 2, 1991? Oleekwa otú ọ gaara esi ede ya n'elu mpempe akwụkwọ karịrị 130, bụ́ nke e buru ụzọ gụọ nọmba, na ozi ga -akwụsị n'ụzọ zuru oke na njedebe nke ibe 130? Pedro Regis, n'onwe ya, amaghịkwa ihe ụfọdụ usoro okwu ọmụmụ nke e jiri mee ihe n'okwu ahụ pụtara. A na -eme atụmatụ na ihe dị ka ndị akaebe 8000 nọ, gụnyere ndị nta akụkọ TV, n'ihi na Nwanyị nwanyị anyị nke Anguera kwere nkwa ụbọchị gara aga inye ndị nwere obi abụọ “akara”.
Ndị na-anụbeghị iwebata ezi okwu maka mkpughe nke “onyinye nke ibi Ndụ nke uche Chineke,” nke Jizọs nyefere Luisa na-enwe obi abụọ mgbe ụfọdụ site n'ụdị ịnụ ọkụ n'obi nke ndị webatara okwu mmeghe a: “Gịnị kpatara e ji kwusie ike otú a Ozi nwanyị a na-enweghị ka ọ hà ya si Italytali nwụrụ afọ 70 gara aga? ”
Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịchọta ụdị nnabata a n’akwụkwọ ndị ahụ. Okpueze nke Akụkọ ihe mere eme, Okpueze nke Nsọ, Anyanwụ nke uche m (nke Vatican bipụtara n'onwe ya), Ntụziaka maka Akwụkwọ nke Eluigwe (nke na -ebu oke mkpa), nchịkọta nkenke Mark Mallett Na Luisa na Ihe Odide Ya, ọrụ nke Fr. Joseph Iannuzzi, na isi ndị ọzọ, biko kwe ka anyị, n ’ahịrịokwu ole na ole, ka anyị gbalịsie ike ịkwụsị njedebe ahụ.
A mụrụ Luisa na Eprel 23, 1865 (ụbọchị ụka nke St. John Paul II mechara kpọọ dị ka ụbọchị emume nke Chukwu ebere ụbọchị ụka, dịka arịrịọ nke Onyenwe anyị n'ihe odide nke St. Faustina). Ọ bụ otu n’ime ụmụ nwanyị ise bi n’obodo nta bụ́ Corato, Italytali.
Site na nwata ya, ekwensu nke merụrụ ahụ Luisa pụtara n’ihu ya na nrọ ndị ụjọ. N'ihi ya, ọ nọrọ ọtụtụ awa na-ekpe ekpere Rosary na ịrịọ nchekwa nke ndi nsọ. Ọ bụ rue mgbe ọ ghọrọ "Nwa Meri Mary" ka nrọ ọjọọ ahụ kwụsịrị mgbe ọ dị afọ iri na otu. N'afọ sochirinụ, Jizọs malitere ịgwa ya okwu n'ime obi ya karịsịa mgbe ọ natasịrị Oriri Nsọ. Mgbe ọ dị afọ iri na atọ, Ọ pụtara n’ihu ya n’ọhụụ ọ hụrụ na veranda nke ụlọ ya. N'ebe ahụ, n'okporo ámá dị n'okpuru, ọ hụrụ ìgwè mmadụ na ndị agha bu ngwá agha ka ha na-eduga ndị mkpọrọ atọ; ọ matara na Jizọs bụ otu n’ime ha. Mgbe O rutere na mbara ihu ya, o weliri isi ya elu tie mkpu sị: “Mkpụrụ obi, nyere m aka! ” N'ịbụ onye nke ahụ kpaliri mkpali, Luisa ji obi ya wepụta onwe ya site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu dị ka mkpụrụ obi e merụrụ ahụ iji gbaghara mmehie nke ihe a kpọrọ mmadụ.
Ihe dị ka afọ iri na anọ, Luisa malitere ịhụ ọhụụ na ngosipụta nke Jizọs na Meri yana ahụhụ anụ ahụ. N’otu oge, Jizọs kpuwere okpueze ogwu n’isi ya nke mere ka isi ghara ịtụ ya, ya enwekwa ike iri nri ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ. Nke ahụ ghọrọ ihe omimi dị omimi ebe Luisa bidoro biri naanị Oriri Nsọ dịka 'nri ụbọchị ya'. Mgbe obula onye nkwuputa ya manyere ya ka o rie nri, onweghi mgbe obula ya riri nri, nke putara nkeji ole na ole mgbe nke ahu gasiri, nke di ohuru na nke ohuru, dika agaghi eri nri.
N'ihi ihe ihere o mere n'ihu ndị ezinụlọ ya, bụ ndị na-aghọtaghị ihe kpatara ahụhụ ya, Luisa rịọrọ Onye-nwe ka o zobe ule ndị a n'aka ndị ọzọ. Jizọs mere ihe ọ rịọrọ ozugbo site n'ikwe ka ahụ ya rie enweghi ike imeghari, onodu dika onodu dika odi ka onwuru. Ọ bụ naanị mgbe onye ụkọchukwu mere akara nke Cross n’elu ahụ ya ka Luisa nwetaghachiri ikike ya. Ọnọdụ ihe omimi a dịgidere ruo mgbe ọ nwụrụ na 1947 — nke na-esote olili nke na-abụghị obere ihe. N'oge ahụ na ndụ ya, ọ nweghị ọrịa anụ ahụ (ruo mgbe ọnya gburu ya na njedebe) ma ọ nweghị ahụ ụra, n'agbanyeghị na ọ nọrọ n'àkwà nta ya ruo afọ iri isii na anọ.
Dika mkpughe nke ijuanya na ebere Chineke nke Jisos nyefere n’aka St Faustina mebere Mgbalị ikpeazụ nke nzọpụta tupu ọbịbịa ya nke ugboro abụọ n’amaraNkwa Ya maka mkpughe nke a ga - enyefe Ohu Chineke Luisa Piccarreta Mgbalị ikpeazụ nke ido nsọ. Nzoputa na ido-nsọ: udiri ihe abua kachasi nma nke Chineke nwere n’ebe umu aka Ya di. Nke mbu bu ntọala nke ndi ikpe azu; ya mere, odi nkpa na ekpughere nkpughe nile nke Faustina mbu; mana, n'ikpeazụ, Chineke chọrọ ọ bụghị naanị ka anyị nabata ebere Ya, kama ka anyị nabata ndụ nke Ya dịka ndụ anyị wee si dị ka Onwe Ya - enwere ike na okike. Mgbe mkpughere nke Faustina, onwe ha, na-ekwu maka ịdị nsọ ọhụrụ nke Ibi Ndụ nke Uche Chukwu (dịkwa ka mkpughe nke ọtụtụ akụkọ ifo ndị ọzọ a nwalere na nso nso 20)th narị afọ), a hapụrụ ya Luisa ka ọ bụrụ onye nkwuputa izizi na “odeakwụkwọ” nke '' ịdị nsọ a dị nsọ '' (ka Pope St John Paul II kpọrọ ya).
N’agbanyeghi mkpughe nile nke Luisa zuru oke (Uka eweputala nka ugboro ugboro ma otutu uzo akwadoro ha ugbua), n’agbanyeghi na ha n’enye, ihe n’ezoputa, ozi kacha ju anya bu mmadu puru iche. Ozi ha dị egwu na-agbagha na obi abụọ na ha ga-abụ ihe na-eweta ọnwụnwa, mana n'eziokwu nke ahụ ọ dịghị ihe mgbakwasị ụkwụ ga-adịgide maka ụdị obi abụọ a. Ozi ahụ bụ nke a: mgbe nkwadebe afọ 4,000 gasịrị n'ime akụkọ ntolite nzọpụta na afọ 2,000 nke nkwadebe dị egwu karị n'ime akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị, Nzukọ-nsọ ​​adịla njikere ịnata okpueze ya; o jikerela ịnata ihe Mụọ Nsọ nọ na-eduzi ya oge niile. Ọ bụghị nanị ịdị nsọ nke Iden n'onwe ya — ịdị nsọ ahụ nke Meri, nwekwara ọ inụ n'ụzọ zuru oke karịa nke Adam na Iv—ọ dị ugbu a maka ịrịọ arịrịọ. A na-akpọ ịdị nsọ a “Ibi Ndụ Dị Nsọ.” Obu amara nke amara. Ọ bụ ịghọta n’ekpere “Nna anyị” na mkpụrụ obi, ka eme uche Chineke n’ime gị dịka emere ndị nsọ nọ n’eluigwe. Ọ naghi agbanwe ọ bụla ofufe na omume ndị dị ugbu a nke Eluigwe na-achọ n'aka anyị - ịgagide Sakrament, ikpe Rosary, ibu ọnụ, ịgụ Akwụkwọ Nsọ, ido onwe anyị nsọ na Meri, na-arụ ọrụ ebere, wdg - kama, ọ na-eme ndị a. na -akpọ ngwa ngwa ma dị elu, n'ihi na anyị nwere ike ịme ihe ndị a niile n'ụzọ nkewa.
Mana Jizọs agwakwala Luisa na Ya enweghị afọ ojuju nanị na mkpụrụ obi ole na ole nọ ebe a na-ebi ịdị nsọ “ọhụụ” a. Ọ ga-eweta ọchịchị ya ụwa niile N’oge dị ebube Ego nke Udo Eluigwe na Ala na-abịanụ. Ọ bụ naanị otu a ka a ga-esi mezuo ekpere “Nna anyị”; Ekpere a, nke kacha kpeekpere niile b u nke am ma, b na am ma gha nke egbugbere Okpara Chineke kwuru. Alaeze ya gha abia. Onweghi ihe ma onweghi onye puru igbochi ya. Mana, site na Luisa, Jizọs na-arịọ anyị niile ka anyị bụrụ ndị ga-akpọsa Alaeze a; iji mụtakwuo banyere uche Chineke (dika O kpughere omimi omimi ya nke Luisa); ibi ndu n’uche Ya n’onwe anyi ma si otua dozie ala maka ochichi elu-igwe ya; inye Ya ihe anyi choro ka O nye anyi nke anyi.
“Jesus, m tụkwasịrị gị obi. Ka uche gi mee. Ana m enye gị uche m; biko nye m nke gị.
“Ka alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n'ụwa, ka emee ya n'eluigwe.
Okwu ndị a ka Jizọs na-arịọ anyị ka anyị nwee mgbe niile n'uche, n'obi na n'egbugbere ọnụ anyị.
Onye ọhụụ nke Nwanyị nwanyị anyị nke Zaro
Ebubo Marian a na -ebo ebubo na Zaro di Ischia (agwaetiti dị nso Naples na Italy) na -aga n'ihu kemgbe 1994. Ndị ọhụụ abụọ ugbu a, Simona Patalano na Angela Fabiani, na -enweta ozi na 8th na 26th nke ọnwa ọ bụla, na Don Ciro Vespoli, onye na -enye ha nduzi ime mmụọ, ya onwe ya bụ otu n'ime ndị na -ahụ ụzọ n'oge mbido ngosipụta, tupu ọ bụrụ onye ụkọchukwu. (Ọ bụ Don Ciro onye, ​​opekata mpe ruo n'oge na -adịbeghị anya, ga -agụ ozi Simona na Angela dere mgbe ha pụtasịrị na obi ụtọ ha chere ma ọ bụ 'zuru ike na mmụọ-riposo nello Spirito").
O nwere ike ọ gaghị amata ozi si n’aka nne anyi nwanyị Zaro na asusu bekee, mana enwere ike ime ka okwu gwaa ha nke oma. Nke mbu bu na ndi ochichi diocesan na-enyocha ha nke oma na n’onye 2014 guzobere onye isi nnochite anya ha, tinyere ihe ndi ozo, na ichota ihe akaebe banyere ogwugwo na nkpuru nkpuru ndi ozo. Ya mere, ndị hụrụ ọhụụ na ihe ngosi ha, dị n'okpuru nyocha siri ike, na ịmara anyị, enweghị ebubo ebubo iji aghụghọ eme ihe. Don Ciro, n’onwe ya ekwupụtawo na Msgr agaghị ekwe ya. Filippo Strofaldi, onye na-eso ihe eserese ahụ kemgbe 1999, ka onye ncheta ahụ kpebiri ikpe ahụ ma ọ bụ ihe na-akpata ọrịa uche. Ihe nke ato kwadobere iwepu ihe omuma nke Zaro bu ihe omuma doro anya na 1995, ndi ohuru a nwere ihe nlere anya (nke edeputara na akwukwo a. Epoch) nke mbibi 2001 nke winlọ Ejima Abụọ * na New York. (Ọ bụ nke a dọtara uche nke ndị nta akụkọ mba na Zaro). Banyere ọdịnaya nke ozi ndị ahụ, ** enwere mmekọrịta dị n'etiti ha na isi mmalite ndị ọzọ, na-enweghị njehie mmụta okpukpe.
Ihe nkiri vidio ()tali) tinyere ihe nkiri 1995 nke ndị hụrụ ya (n'etiti ha Ciro Vespoli):
Don Ciro Vespoli bụ otu n'ime ndị na - ahụ ụzọ mbụ dị ka onye toro eto, ma mechara bụrụ ụkọchukwu. Ọ bighị nso na Zaro kama ọ na-anata ma na-echekwa ozi ndị ahụ.
Akụkọ Valeria Copponi nke ịnata mpaghara site n'eluigwe bidoro mgbe ọ nọ na Lourdes soro di ya ndị agha njem njem. N'ebe ahụ, ọ nụrụ olu ọ kọwara dị ka mmụọ ozi na -eche ya nche, na -agwa ya ka o bilie. Mgbe ahụ, o nyefere ya Nwanyị nwanyị anyị, onye kwuru, “Ị ga -abụ ebe nlebara anya m” - okwu ọ ghọtara mgbe afọ ole na ole gachara mgbe onye ụkọchukwu jiri ya na ngalaba ekpere ọ malitere n'obodo Rome, Italy. Nzukọ ndị a, nke Valeria na -ezipụta ozi ya, na -ebu ụzọ mee ya ugboro abụọ kwa ọnwa na Wednesde, wee na -eme kwa izu na arịrịọ Jizọs, onye ọ na -ekwu na ya. hụrụ na ụlọ ụka Sant'Ignazio n'ihe gbasara nzukọ ya na onye Jesuit nke America, Fr. Robert Farili. Ngwọta dị iche iche karịrị ike mmadụ, gụnyere nke sitere na otutu sclerosis, nke gụnyere mmiri ọrụ ebube na Collevalenza, 'Italian Lourdes' na ebe obibi onye nọn Spain, Mama Speranza di Gesù (1893-1983), na-akwado ugbu a maka oku Valeria. ịkụ aka.
Ọ bụ Fr. Gabriele Amorth onye gbara Valeria ume ka ọ gbasaa ozi ya n'èzí n'ekpere. Omume nke ndị ụkọchukwu nwere ọdịiche dị iche iche: ụfọdụ ndị ụkọchukwu nwere obi abụọ, ebe ndị ọzọ na-esonye na cenacle.
The -esonụ sitere na Valeria Copponi n'okwu nke aka ya, dị ka e kwuru na weebụsaịtị ya ma sụgharịa ya na ndị Italiantali: http://gesu-maria.net/. Enwere ike ịchọta ntụgharị Bekee ọzọ na saịtị Bekee ya ebe a: http://keepwatchwithme.org/?p=22
“Abụ m ọrụ Jizọs ji mee ka anyị tasteụrịa Okwu ya maka oge anyị. N’enyeghị m nke a, a na m anabata nnukwu egwu na ibu ọrụ nke nnukwu onyinye a, na-enyefe onwe m n’uche uche Chineke. A na-akpọ ụdị egwu a dị egwu “mpaghara.” Nke a na-emetụta okwu dị n'ime na-esite n'uche, n'ụdị echiche, kama site n'obi, ka à ga - asị na olu sitere 'n'ime ha.'
Mgbe m bidoro ide (ka anyị kwuo, n'okpuru mkpụrụedemede), amachaghị m banyere uche mmadụ niile. Naanị na ngwụcha, mgbe ị na-agụgharị, m ga-aghota ihe okwu ndị a "gwara m" karịa ma ọ bụ na-erughị ngwa ngwa na nkà mmụta okpukpe nke m anaghị aghọta. Na mbu, ihe m ji eme ya Idem ama akpa nke kachasị nke a bụ 'ide' ederede ede na-enweghị nhichapụ ma ọ bụ mmezigharị, nke zuru oke ma zie ezi karịa karịa usoro nkịtị, enweghị ike ọgwụgwụ n'akụkụ m; ihe niile na-apụta. Ma anyị matara na Mmụọ na-akụ ebe ma mgbe Ọ chọrọ, yabụ na obi umeala dịkwa ukwuu ma na-ekweta na enweghị ya, na anyị enweghị ike ime ihe ọ bụla, anyị na-ewepu onwe anyị ige ntị n'okwu ahụ, Onye bụ Wayzọ, Eziokwu na Ndụ. "